Isahluko 65.Ungathola Iqiniso Ngemva Kokuyiguqulela Inhliziyo Yakho Yangempela KuNkulunkulu | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ukukhululeka Nenkululeko Kufinyelelwa Kuphela Ngemva Kokubeka Eceleni Inhloso Nezifiso Zakho
Njengabaholi, akufanele nibe nomhawu ngamakhono abanye, futhi ngalokho niyofaneleka, ukufeza umthwalo wenu, futhi nibonakalise ngokugcwele ukuzinikela kwenu. Nikhathazeka njalo ngokuthi abanye bazogqama kunani, ukuthi abanye bazoba bakhulu kunani. Ingabe lokhu akusikho ukuba nomona ngokubaluleka kanye nekhono? Ingabe lokhu ukuziphatha kokucabangela injongo kaNkulunkulu? Lolu uhlobo lwesimo esinjani? Lokhu kuwukuba nenzondo! Kuwukuzicabangela wena kuphela, ukwanelisa isifiso sakho sobugovu kuphela, ukungacabangeli izithakazelo zendlu kaNkulunkulu, ukungacabangeli umsebenzi wabanye, ukucabangela izithakazelo zakho kuphela. Empeleni, akuthinti izithakazelo zomuntu: Lapho usiza ekuthuthukiseni ikhono lomunye umuntu, khona-ke kwengezeka omunye umuntu onekhono endlini kaNkulunkulu, khona-ke ingabe ngalokho nawe awenzi umsebenzi wakho ngokufanayo? Ingabe ngalokho awethembekile ekwenzeni lo msebenzi? Lesi yisenzo esihle phambi kukaNkulunkulu. Ungenzi izinto phambi kwabantu; kufanele uzenze phambi kukaNkulunkulu. Ngokwamukela ukubhekwa nokuhlolwa uNkulunkulu, inhliziyo yakho iba sesimweni esikahle. Uma njalo ukhathazeka ngokwenza izinto ukuze ubonwe ngabantu, khona-ke inhliziyo yakho ngeke ize ibe sesimweni esikahle. Futhi, lapho wenza izinto ungazenzeli wena. Ungazicabangeli izithakazelo zakho siqu. Ungazicabangeli izithakazelo zomuntu. Ungacabangeli isikhundla sakho siqu, ukuvelela, noma idumela. Okokuqala cabangela izithakazelo zendlu kaNkulunkulu. Beka phambili izithakazelo zendlu kaNkulunkulu. Cabangela injongo kaNkulunkulu. Cabanga ngomsebenzi wakho siqu kuqala: Ingabe kukhona ukungahlanzeki endleleni osebenza ngayo? Ingabe uzinikele ngokugcwele? Ingabe uye wafeza umthwalo wakho wemfanelo? Ingabe uye wazikhandla ngamandla akho onke? Ingabe wenza ngamandla nangenhliziyo yakho yonke ekucabangeleni umsebenzi wakho kanye nomsebenzi wendlu kaNkulunkulu? Kufanele uzicabange lezi zinto. Lapho ucabanga ngalezi zinto, ngeke wehluleke ukwenza umsebenzi wakho, ngaphandle, uma kuwukuthi, umsebenzi wakho mubi noma unamaphutha bese kuvela ubuthakathaka emsebenzini wakho ngenxa yokuthi kuntuleka imfanelo yakho siqu, ulwazi lwakho alujulile, awunalo ulwazi noma awejwayelene nomsebenzi wakho, noma untula ikhono. Nokho, uye wazikhandla kakade ngamandla akho onke, futhi awenzi ngokwezifiso zakho zobugovu, noma ngokwezithakazelo zakho siqu, kodwa kukho konke ucabangela umsebenzi wendlu kaNkulunkulu futhi wenze ngokucabangela okuzozuzisa uNkulunkulu kanye nomsebenzi kaNkulunkulu. Inhliziyo yakho isesimweni esihle, futhi unemisebenzi emihle emehlweni kaNkulunkulu. Ingabe umuntu onale misebenzi emihle akayena umuntu oneqiniso langempela? Lo muntu unobufakazi. Uma ngaso sonke isikhathi uphila ngokuvumelana nezifiso zakho zobugovu, njalo wenelisa izifiso zakho zobugovu, khona-ke lolu hlobo lomuntu alunabo ubufakazi emehlweni kaNkulunkulu futhi alunabo ubufakazi emehlweni kaSathane. Lolu uphawu olwenza uNkulunkulu abe namahloni, olwenza uNkulunkulu abe namahloni ezintweni zonke; Uthi, “Kodwa angenzanga lutho; ngingamenza kanjani uNkulunkulu abe namahloni?” Emicabangweni yakho, ezinhlosweni, emigomweni, nasezizuseni zezenzo zakho, kanye nasemiphumeleni yalokho okwenzile—ngakho konke wanelisa uSathane, uba inhlekisa, futhi uzibeka ekubeni usoleke, futhi awunabo ngisho nobuncane ubufakazi okufanele ukuthi ube nabo njengomKristu. Kuzo zonke izinto uhlambalaza igama likaNkulunkulu futhi awunabo ubufakazi bangempela. Ngakho, ingabe uNkulunkulu uzozikhumbula izinto ozenzile? Ekugcineni, yisiphi isiphetho uNkulunkulu azofinyelela kuso ngezenzo zakho nangomsebenzi owenzile? Ingabe ngeke yini kube nomphumela? Umbono? EBhayibhelini, iNkosi uJesu uthi, “Abaningi bazothi kimina ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asizange siphrofethe ngegama lakho? Futhi sakhipha namadimoni ngegama lakho? Futhi ngegama lakho senza imisebenzi eminingi emihle?” (Mathewu 7:22). Khona-ke yini iNkosi uJesu ayishoyo? (“Khona-ke ngizobe sengifakaza kubo ngithi, anginazi: sukani kimi, nina enenza okubi" (Mathewu 7:23).) Kungani iNkosi uJesu esho lokhu? Kungani labo abaye baphulukisa abagulayo futhi bakhipha amadimoni ngegama leNkosi, bahamba beyoshumayela ngegama leNkosi, beba abenzi bokubi? Obani laba benzi bokubi? Ingabe yilabo abangakholelwa kuNkulunkulu? (Cha.) Obani? (Yilabo abakholelwa kuNkulunkulu kodwa abangalenzi iqiniso.) Yebo. Bayakholelwa kuNkulunkulu futhi balandela uNkulunkulu. Futhi bayazikhandla ngoNkulunkulu, benzela uNkulunkulu izinto, futhi benze umsebenzi wabo. Nokho, ekwenzeni umsebenzi wabo abathembekile futhi abanabo ubufakazi, futhi ukwenza kwabo umsebenzi kube ububi. Ngakho, iNkosi uJesu uthi, “Sukani kimi, nina enenza okubi.”
Iyiphi indinganiso okuhlolwa ngayo izenzo zomuntu ukuthi zinhle noma zimbi? Kungaba ukuthi noma ukungabi ukuthi, emicabangweni yakho, ekukhulumeni, nasezenzweni, unobufakazi bokwenza iqiniso kanye nokuphila ngokuvumelana neqiniso langempela. Uma ungenakho lokhu ngempela noma ungaphili ngokuvumelana nakho, khona-ke ngokungangabazeki ungumenzi wokubi. UNkulunkulu ubabheka kanjani abenzi bokubi? Imicabango kanye nezenzo zakho zangaphakathi konke kwenza uNkulunkulu abe namahloni. Akumfakazeli uNkulunkulu. Ukumhlazisi uSathane noma kumnqobe; kunalokho, kukho konke kuwuphawu olwenza uNkulunkulu abe namahloni. Awumfakazeli uNkulunkulu, awuzikhandli ngoNkulunkulu, futhi awufezi umthwalo wakho wemfanelo kanye nesibopho sakho kuNkulunkulu kodwa kunalokho uzenzela wena. Yini esikiselwa ukuthi “wena?” Ukuthi uSathane. Ngakho, ekugcineni uNkulunkulu uzothi, “Sukani kimi, nina enenza okubi.” Awukho umvuzo. UNkulunkulu akabakhumbuli. Emehlweni kaNkulunkulu izenzo zabo bezingezinhle kodwa zibe yizenzo ezimbi. Ingabe lokhu akulona ize? Manje, kungakhathaliseki ukuthi isifiso sombono wakho siwukuzimisela ukuphishekela iqiniso, noma leso sifiso asicacile futhi selokhu awuqiniseki ngokuthi kuyini ukuphishekela iqiniso, indlela elula yokwenza ukuthi ucabange ngezithakazelo zendlu kaNkulunkulu kuqala. Kukho konke cabanga ngezithakazelo zendlu kaNkulunkulu kuqala. Khohlwa yizifiso zakho zobugovu. Khohlwa izisusa, inhloso, ukukhathazeka ngokuvelela kanye nesikhundla sakho siqu. Beka lezo zinto ngemuva kwakho bese ucabanga ngezithakazelo zendlu kaNkulunkulu kuqala—yilokhu okungenani okufanele kwenziwe. Uma umuntu enza umsebenzi wakhe angeke aze enze ngisho nalokhu, khona-ke kungashiwo kanjani ukuthi wenza umsebenzi wakhe? Lokhu akukhona ukwenza umsebenzi wakho. Kufanele okokuqala ucabange ngezithakazelo zendlu kaNkulunkulu, ucabange ngezithakazelo zikaNkulunkulu, ucabange ngomsebenzi kaNkulunkulu, futhi ubeke lezi zinto kuqala; bese kamuva ucabangela ukuzinza kwesikhundla sakho kanye nendlela abanye abakubheka ngayo. Ingabe ungakwenza lokhu? Ingabe anikuzwa sengathi kulula kancane uma nikwehlukanisa ngalezi zinyathelo bese nizilungisa ngasinye? Uma wenza lokhu okwesikhashana, uzozwa ukuthi ukwanelisa uNkulunkulu akuyona into enzima. Futhi ngemva kokubhekana nenkathi yokukwazi ukufeza umthwalo wakho, ukwenza izibopho nemisebenzi yakho, ukubeka eceleni izifiso zakho, ukubeka eceleni izinhloso nezisusa zakho, ukucabangela injongo kaNkulunkulu, futhi ubeke izithakazelo zikaNkulunkulu nezendlu yaKhe kuqala, uzocabanga, “Kuhle ukuphila kanjena! Kuwukuphila impilo eqondile nethembekile, hhayi ukuba umuntu olukhuni, ongelusizo lwalutho nongenamqondo ovalekile noma omubi kodwa kunalokho ukuphila impilo enobulungisa nehloniphekile. Lena indlela umuntu okufanele aphile futhi enze ngayo.” Kancane kancane, isifiso esingaphakathi enhliziyweni yakho sokwanelisa izithakazelo zakho siqu siyoncipha.
Kunabanye abaye bakholelwa kuNkulunkulu isikhathi eside kodwa abangakangeni ngokujulile ezifundweni zokuphishekela iqiniso, ukwenza ngokuvumelana neqiniso, kanye nokungena eqinisweni langempela. Futhi abanakho ukufunda okujule kangako ngokwenza, ngakho ulwazi lwabo alujulile. Abanakho noma yikuphi okuhlangenwe nakho kwangempela. Abakafundi ngempela ngokwenza. Ngakho, ngeke banikeze ubufakazi bangempela. Manje ngizonitshela indlela elula yokwenza: Okokuqala zibekeni eceleni izinhloso zenu, zibekeni eceleni izithakazelo zenu, zibekeni eceleni izifiso zenu zobugovu. Ngemva kokwenza lokhu okwesikhashana, isimo sakho sangaphakathi sizoshintsha ngaphandle kokuba usiqaphele. Ngokushesha lapho isimo sakho siguquka, uzoshintsha ekubeni nesimo esingacacile nesingaqondakali sokungacaci phakathi kokuba nesithakazelo esincane ekukholelweni kuNkulunkulu kanye nokwenqena ekukholelweni kolunye uhlobo lwesimo, lowo ozwa ukuthi ukukholelwa kuNkulunkulu kuhle, ukuthi ukuba umuntu omuhle kuhle, lowo ozwa umfutho wokuba umuntu omuhle, lowo onesithakazelo sokuba umuntu omuhle, lowo ozwa ukuthi ukuphila ngale ndlela kunenjongo, futhi okuthi ngokuphila ngale ndlela ezwe ukwaneliseka, ukuqiniseka, ukuthula, kanye nenjabulo ngaphakathi enhliziyweni. Ukushintshela kulolu hlobo lwesimo kunomphumela omkhulu. Lo mphumela unesici sokubambisana kwabantu kanye futhi nesici somsebenzi woMoya oNgcwele. Kunesimo esibi ngaphakathi kumuntu: ukucindezeleka, ukuphelelwa yithemba, noma ukuba buthakathaka; noma ubathaka; noma ukuzizwa ungenalusizo lwalutho; noma umuzwa ophikelelayo wokwenza okubi; noma ukugqilazwa njalo ukukhathazeka ngokuvelela, izifiso zobugovu, kanye nenzuzo yomuntu siqu; noma ukuzenyeza. Kukhona ezinye izimo ezingezinhle ezikugqilaza njalo kulezi zinto. Uma uphila ngaphakathi kwalezi zimo ezicasulayo, kunzima kakhulu ngawe ukuthola umsebenzi woMoya oNgcwele. Uma unobunzima bokuthola umsebenzi woMoya oNgcwele, khona-ke izinto ezinhle ngaphakathi kuwe ziyoba zincane. Lapho izinto ezinhle ngaphakathi kuwe zizincane, kunzima ngawe ukuthola iqiniso. Abantu bathembela njalo ekucindezeleni ngenhloso—bazibamba ngale ndlela noma ngaleya ndlela—futhi ngeke bazikhulule kulezi zimo ezingezinhle noma ezimbi. Ingxenye yalokho kungenxa yabantu, uma bengeke bathole indlela yokwenza evumelana nabo. Esinye isizathu, futhi lesi esiyinhloko, ukuthi abantu njalo bawela kulezi zimo ezingezinhle, ezicwilayo, eziwohlokayo, futhi uMoya oNgcwele awusebenzi—ngisho noma Yena ngezinye izikhathi ebanikeza ukukhanyiselwa, akawenzi umsebenzi omkhulu. Ngakho, kumthatha umzamo omkhulu umuntu ukwenza noma yini, futhi kunzima ukubona nokuqonda okuthile; kunzima ukuthola ukukhanyiseleka nokukhanyelwa futhi abe nokukhanya. Ngoba kunezinto eziningi kakhulu ezingezinhle, ezimbi, nezicwila ngaphakathi kwakho ezigcwalise yonke indawo ngaphakathi kwakho. Ngakho, esinye izizathu ukuthi umuntu ngeke akuthole ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele, ngeke athole umsebenzi woMoya oNgcwele, futhi ngaleyo ndlela ngeke aphume kulezi zimo. Ayikho indlela yokuguqula lezi zimo zakho ezingezinhle; uMoya oNgcwele awusebenzi, futhi ngeke uthole indlela eya phambili. Ngenxa yalezi zizathu ezimbili ezahlukene, kunzima ngawe ukungena esimweni esihle, esijwayelekile. Nakuba ningakhuthazela kakhulu futhi nisebenze kanzima ekwenzeni imisebenzi yenu, nakuba niye nazikhandla ngamandla amakhulu, nashiya ikhaya kanye nomsebenzi, nangasala nalutho, isimo senu sangaphakathi selokhu asikaguquki ngempela. Kunezinto eziningi kakhulu ezithandelayo ezikubambayo ekubeni wenze iqiniso, ekubeni ungene eqinisweni langempela. Imibono yomuntu siqu, imicabango yomuntu siqu, kanye nolwazi lomuntu siqu, ifilosofi yokuphila kanye nezinye izinto zomuntu siqu ezingezinhle: izifiso nezithakazelo zobugovu, ukukhathazeka ngokuvelela, nokungaboni ngasolinye nabanye—zonke lezi zinto ezehlukene zigcwalisa indawo ngaphakathi kuwe. Nakuba nibancane, ubani phakathi kwenu ongenangqondo? Ngaso sonke isikhathi uma nginyakaza noma ngenza umsindo—ngisho into ethile, ngikhwehlela, ngisunduza kancane isihlalo saMi—ukuyaluza kwemicabango kuphuphuma ezinhloko zenu. Kungani kunjalo? Ingabe anihlakaniphile? Akakho phakathi kwenu ongahlakaniphile; angizange nginithathe kalula. Abantu abanalutho oluhle. Amakhanda abo agcwele imicabango ephambene kanye nemibi; leli yiqiniso abantu abangenakuliphika. Inhliziyo yomuntu iye yagcwaliswa futhi yabamatasa ngezinto zikaSathane. Uma ungazikhiphi lezi zinto, uma ungenakuzikhulula kulezi zimo, uma ungeke ube nokufana nengane encane ngempela—ephilile, ethandekayo, engenacala, engazi lutho, ethembekile, emsulwa—bese uza phambi kukaNkulunkulu, khona-ke kuzoba nzima kakhulu ngawe ukuthola iqiniso.
Manje ninento eyodwa efanele ngempela umzamo: ukuzimisela kwenu ukukhuthazelela ukuhlupheka kanye nokholo lwenu. Lokhu kukodwa kunisindisile. Ukube beningenakho lokhu, benizoba sesimweni esibi kakhulu. Abanye abantu abanakho ukuzimisela kokuthi bakhuthazelele ukuhlupheka noma umoya kanye nogqozi lokuzikhandla futhi banikele ukuphila kwabo kuNkulunkulu, ngakho abanawo umdlandla wokwenza umsebenzi wabo. Abanye abantu benza umsebenzi wabo okwesikhashana, kodwa ngokushesha lapho bebona ukuthi abasenaso isithakazelo kuwo bayayeka. Bahamba bayofuna umlingani, bayofuna ingcebo, bashade, noma bayosebenza. Umuntu onjalo uzwa kungenawo umphumela ukuchitha isikhathi sakhe lapha. Akanalo ukholo lokuqhubeka enza njalo, futhi ucabanga ukuthi ukuhlala lapha kuwukuchitha ubusha, kuwukuchitha isikhathi sokuphila esingcono kakhulu, kuwukuchitha isikhathi, kuwukuchitha impilo yakhe. Ngenhlanhla, manje abaningi benu ababanjiwe yilezi zinto futhi seniphume kakade kuleso simo. Nokho, imibono, imicabango, ulwazi, inhloso yomuntu siqu, kanye nezifiso zomuntu siqu ezigcwala emakhanda enu zihlala zingashintshile esimweni sazo sokuqala. Ngakho lapho nje nizwa ukuthi indlu kaNkulunkulu izotshala amakhono ehlukene, ngokushesha lapho kuhilela isikhundla, ukuvelela, noma idumela, inhliziyo yawo wonke omuntu yagxuma ngokulangazelela, futhi nifuna njalo ukugqama, ukuba umuntu obalulekile, ukuba umpetha, ukuba odumile, ukudunyiswa. Anizimisele ukuhoxa, nifuna ukulwa njalo, nakuba ukulwa kubangela amahloni. Ukulwa akafanele endlini kaNkulunkulu, kodwa ananelisekile ngokungalwi. Lapho nibona omunye egqama, niba nomona, inzondo, ukukhononda, futhi nibe nomuzwa wokuthi akufanele. “Kungani ngingagqami? Kungani kungemina? Kungani kunguye njalo othola ukugqama futhi kungake kube yimina?” Kukhona inzondo ethile. Uzama ukucindezela inzondo, kodwa angeke, ngakho uyathandaza. Ngemva kokuthandaza, uzizwa ungcono okwesikhashana, kodwa kamuva uma uphinda ubhekana nenkinga awukwazi ukuyinqoba. Ingabe lokhu akusikhona ukuba nesiqu esingokomoya esingavuthiwe? Ingabe lomuntu akaweli ogibeni lwalezi zimo? Lobu ubugqila bemvelo yobusathane eyonakele. Ngakho, cabanga ngalokhu kancane: Uma umuntu eye walahla lezo zimo zokonakala, ingabe unenkululeko futhi ukhululekile? Cabanga ngalokhu: Hlobo luni loshintsho umuntu okufanele alwenze uma efuna ukungaweli kulezi zimo futhi efuna ukukwazi ukulahla lezi zimo kanye nokukhululeka ekucasulweni yilezi zinto? Yini okufanele umuntu ayithole ngaphambi kokuba angakhululeka ekucasulweni yilezi zinto, futhi akwazi ngempela ukukhululeka nokuba okhululekile? Ngakolunye uhlangothi, umuntu kufanele abone izinto ngokucacile: Lawa madumela nezikhundla kungamathuluzi kanye nezindlela zikaSathane zokonakalisa abantu, ukubacupha, ukubawohloza, kanye nokubalimaza. Kufanele okokuqala ubone ngokucacile leli phuzu ngokukhuluma. Futhi, ukubeka eceleni lezi zinto kunzima kakhulu kunoma ubani, ukuthi basha noma badala noma basha ekukholweni noma sebenesikhathi eside. Ungacabangi ukuthi ubunzima kulabo ababonakala bethulile buncane kunalobo obukubantu abakhuluma kakhulu. Kunzima kuwo wonke umuntu. Akekho umuntu ongakunqoba lokhu. Isimo sangaphakathi sawo wonke umuntu siyafana; lezi zinto yizo ngempela uSathane azisebenzisayo ukuze onakalise abantu, yilokho okwakhelwe ngaphakathi kubantu. Ngakho, imvelo eyonakele yabo bonke abantu iyafana; indlela ebonakaliswa ngayo kuphela eyehlukene. Abanye abantu abakhulumi lutho kodwa banayo imicabango ezinhliziyweni zabo. Abanye abantu bayayiveza lapho bekhuluma. Abanye abantu bayalwa. Abanye bayaphikisa. Abanye abalwi futhi abaphikisi, kodwa ngokufihlekile babanga ububi. Abanye bayakhononda futhi bakhala ngokufihlekile, baphonse izinto noma bazephule. Izindlela abazibonakalisa ngazo azifani, kodwa imvelo yabo bonke iyafana, ayinawo nomncane umehluko, futhi imvelo yabantu abaningi igcwele lezi zinto. Zingalahlwa kanjani lezi zinto? Ingabe ninalo ikhambi? Okokuqala, kufanele uzibone ngokucacile, bese kuba ukuthi ufunde ukuyeka lezi zinto futhi uzibeke eceleni. Uma ngaso sonke isikhathi unaka njalo lezi zinto, uzabalazela njalo lezi zinto, uma inhliziyo yakho imatasa kakhulu futhi igcwele lezi zinto, uma ungafuni ukuzibeka eceleni futhi uzifukamele njalo ngaphandle kokuzibeka eceleni, khona-ke ulawulwa futhi uboshwe yilezi zinto. Uyisigqila, futhi ngeke uziyeke. Kufanele ufunde ukuziyeka futhi uzibekele eceleni lezi zinto, uncome abanye, ubavumele ukuba bagqame. Funda ukuhoxa. Ungalwi. Ungancintisani. Ungalwi ngamandla futhi ujahe ukuthatha ithuba ngokushesha lapho kuvela ithuba lokugqama noma lokuthola udumo. Funda ukuyeka, kodwa ungephuzi ukwenza umsebenzi wakho. Yiba umuntu owenza umsebenzi wakhe ekusithekeni, lapho abantu bengaboni khona, futhi ungabukisi phambi kwabanye. Lapho uyeka futhi ubeka eceleni ngokwengeziwe, inhliziyo yakho iyoba nokuthula ngokwengeziwe futhi kuyovuleka isikhala esengeziwe ngaphakathi kuyo, kanti nesimo sakho siyothuthuka ngokwengeziwe. Lapho ulwa futhi uncintisana ngokwengeziwe, isimo sakho siyoba mnyama ngokwengeziwe; kuzame uma ungakukholwa. Uma ufuna ukuguqula lolu hlobo lwesimo, uma ungafuni ukulawulwa yilezi zinto, khona-ke kufanele okokuqala uzibeke eceleni futhi uziyeke. Lapho ulwa ngokwengeziwe, ubumnyama buyokuthandela ngokwengeziwe, futhi kuyokwanda umona nenzondo ngaphakathi enhliziyweni yakho, futhi uyoba nesifiso esinamandla sokuzuza. Lapho isifiso sakho sokuzuza siba namandla, uyohluleka ngokwengeziwe ukwenza kanjalo, futhi njengoba uzuza okuncane inzondo yakho iyokhula. Njengoba inzondo yakho ikhula uyoba mnyama ngokwengeziwe ngaphakathi. Lapho uba mnyama ngokwenziwe ngaphakathi nomsebenzi wakho uyowenza kabi kakhulu ngokwengeziwe. Uma wenza kabi umsebenzi wakho kancane kancane uyosuswa ekubeni usetshenziswe futhi uzoyekwa. Lona umjikelezo wokuxhumana okubi kakhulu.
Ukuze uMoya oNgcwele usebenze kumuntu futhi uveze ushintsho oluhle esimweni sakhe kudingeka ngalowo muntu enze uguquko olukhulu kakhulu, ukuyeka, ukuhlupheka kanye futhi nokushiya, ukuze umuntu afike kancane kancane futhi abambisane noNkulunkulu. Kodwa, uma uMoya oNgcwele ukudalula, kuyindaba ephuthumayo. Uma ungasebenzi ngokuzikhandla kodwa njalo ufuna udumo, ukuncintisana ngesikhundla, ukuvelela, idumela, kanye nezithakazelo zakho, ingabe yilokhu okukwenza ufune ukwenza umsebenzi? Ungawenza umsebenzi uma ufuna ukuwenza, kodwa kungenzeka udaluleke ngaphambi kokuphela komsebenzi wakho. Usuku lwakho lokugcina lufika masinyane lapho udalulwa; ingabe lusazoba khona ushintsho ngalolo suku? Khona-ke umbuzo awusekhona ukuthi isimo sakho sisengashintsha; kunalokho, ukuthi cishe umphumela wakho usunqunyiwe kakade, okuzoba yinkinga kuwe. Ngokuvamile abantu bayona bese beveza izimo zokukhohlakala kwabo. Benza amaphutha amancane ambalwa, okungaba ukwanelisa izifiso zenyama zomuntu siqu, ukukhuluma ngezisusa ezimbi, noma ukungathembeki. Uma bengakenzi umonakalo wezinto ezinkulu, ukona isimo sikaNkulunkulu, noma ukuphazamisa nokuthikameza umsebenzi kaNkulunkulu—uma bengakenzi okunye kwalokhu—khona-ke bonke bangathethelelwa. Kodwa, ingabe basengaguquka uma izenzo zabo ziphumela enhlekeleleni noma ebubini obukhulu? Kunjengokungathi indoda nomfazi abahlala ndawonye. Baba nokungaboni ngaso linye okuncane kanye nokugxekana. Ngezinye izikhathi basho izinto ezilimaza omunye. Kodwa, uma nje bobabili besezimisele ukubekezela ndawonye, ukuvumelana nezimo zomunye kanye nokuyekethisa, basengakwazi ukuqhubeka behlala ndawonye. Nokho, uma omunye wabo esenomunye umuntu athandana naye, enqaba ukushintsha, futhi kushiye omunye engenamandla okulungisa isimo, khona-ke ingabe lowo mshado uzosinda? Umlingani wakho akasenathemba kuwe, akasakuthandi. Awusekho enhliziyweni yakhe. Akusenakwenzeka ngaye ukuthi abe nawe. Ngaphambilini wayebona okuhle kukho konke ngawe, futhi manje akasaboni lutho oluhle kuwe. Ingabe ningaqhubeka ndawonye ngale ndlela? Angeke. Noma okungakanani ukukhuthazela noma ukuyekethisa kuyize futhi akunampumelelo. Lo mshado usuphazamisekile, futhi okuwukuphela kwento engabakhona yisehlukaniso. Uma laba ababili befinyelela kuleli zinga, lo mshado awusekho. Ngisho noma laba ababili basahlala ngaphansi kophahla olufanayo, umshado manje usukhona ngegama kuphela, futhi akusenamehluko phakathi kokuthi sebedivosile noma abadivosile. Ngakho, uma wena njengekholwa ufinyelela kulelo zinga njengoba wenza umsebenzi wakho—okuwukuthi usuyeke amathuba amaningi, inhliziyo yakho isihlala ilukhuni, awusaphenduki, awusabuyeli endleleni efanele noma awusabheki emuva, uyaphikelela ezenzweni nasezindleleni zakho kungakhathaliseki ukuthi maningi kangakanani amathuba uNkulunkulu akunika wona, awuyeki inhloso, imigomo yakho noma indlela yokufuna—uma ufinyelela kulelo zinga, khona-ke ngokuhamba kwesikhathi kuzofika usuku lapho, indaba ethile encane noma izwi elithile elikhulunywayo noma kwesithile isimo esivame kakhulu uzodalulwa. Ngakho, uma umuntu engenakuthola umsebenzi woMoya oNgcwele futhi akanakuthola iqiniso, uma selokhu ebophekile futhi elawulwa yizo zonke izinhloso kanye nesimo sobusathane esonakele, futhi uma angeke aphume ekuphileni kulezi zifiso zobugovu, izinhloso, nezifiso zomuntu siqu, khona-ke lo muntu usengozini enkulu, futhi kungekude kangako uzokhubeka, futhi kungekude kangabo uzodalulwa. Mhlawumbe manje awukakhubeki, kodwa lokho akusho ukuthi ngeke ukhubeke esikhathini esizayo. Noma kungaba ukuthi manje usengakwazi ukwenza umsebenzi wakho, ukuthi ungaba nalolo gqozi oluncane kanye nesifiso sokuzikhandla, ukuthi ungaba nalokho kuzimisela okuncane kokuba upheleliswe kanye nokuzimisela ukuzikhandla futhi uhluphekele uNkulunkulu; nokho, lokhu akunakuthatha indawo yokungena kwakho eqinisweni langempela futhi akusho ukuthi ngeke ukhubeke esikhathini esizayo. Futhi akusho ukuthi ngeke ube buthakathaka esikhathini esizayo.
Nithini: Kungaphansi kwasiphi isimo lapho umuntu ephephile futhi elondeke ngempela khona? Abanye bathi, “Ukukholelwa kuNkulunkulu nokuba phambi kukaNkulunkulu kufana nokuhamba phezu kwezitsha ezifayo! Kufana nokuhlala ubambe amazinyo!” Abanye bathi, “Ukukholelwa kuNkulunkulu kufana nesaga salabo abangakholwa esithi, ‘Ukuba kanye nenkosi kufana nokuba seduze kwehlosi.’ Kwesabeka kakhulu! Uma usho noma wenza kabi into eyodwa, khona-ke uzoqedwa—uzopheliswa, uchithwe, uphonswe esihogweni futhi ubhujiswe!” Ingabe kunjalo? (Cha.) Kungani kungenjalo? Yisho izizathu. Kukuphi lapho isaga esithi “Ukuba nenkosi kufana nokuba seduze kwenhlosi” sisetshenziswa njalo khona? Futhi kubhekisela kuphi ukuthi “ukuhamba phezu kwezitsha ezifayo?” Abanye bathi, “Kufana nokuhlala ubambe amazinyo.” Kusho ukuthini lokho? Wonke umuntu kufanele ayazi ichazelo esobala: Konke kubonisa ingozi enkulu. Kufana nomuntu ofuya ibhubesi noma ihlosi: Nsuku zonke ufana nohamba phezu kwezitsha ezifayo, uhlala ebambe amazinyo; yilesi isimo lezi zaga ezibhekisela kuso. Amahlosi namabhubesi yizilwane zasendle ezimvelo yazo enonya ingavuka nganoma yisiphi isikhathi. Ziyizilwane ezingababulali abanonya abangenaluthando ngabantu kungakhathaliseki ukuthi sebahlale nabo isikhathi eside kangakanani. Uma zifuna ukukudla ziyokudla. Uma zifuna ukukulimaza, ziyokulimaza. Ngisho noma uziqeqesha futhi zikwazi, zikuqaphela njengenkosi, uma sezilambile, ziyokudla masinyane lapho zizwa ukunuka kwegazi noma umjuluko. Ukudla umuntu yisenzo sokuphazima kweso; ngomzuzwana nje sekuphelile. Ngakho, ingabe kulungile ukusebenzisa la mazwi ekuchazeni ukukholelwa kuNkulunkulu? Akuke yini ngezinye izikhathi nicabange ngale ndlela elandelayo? “Ukukholelwa kuNkulunkulu ngempela kufana nokuhamba phezu kwezitsha ezifayo. Singaba sesimweni esibi kakhulu nganoma yisiphi isikhathi. Ulaka lukaNkulunkulu luyinto yesikhashana, futhi angathukuthela nganoma yisiphi isikhathi. Angasusa othile esikhundleni nganoma yisiphi isikhathi. Noma ubani ongajabulisi Yena uyasuswa, futhi Yena uyabadalula bese ebasusa. Uthi othile ngeke asetshenziswe futhi ngeke bamsebenzise.” Ingabe kunjalo? (Cha.) Kubonakala sengathi wonke umuntu unolwazi ngalokhu futhi uyakuqonda nokuthi akufanele adukiswe. Lesi yisaga esiyiphutha nesingenangqondo.
Kungakhathaliseki ukuthi abantu banobuqili, amasu, noma ubugwala, izinhloso nezifiso zabo zonke ziyefana. Kuphela nje uma ningazikhulula kulezi zinto futhi ningaguqula lezi zimo, okungenani ningakwazi ukuwenza kahle umsebenzi wena wamanje. Uma umsebenzi wenu niwenza njalo ngezinhloso zenu siqu futhi niwenza ngezifiso nangezisusa zenu siqu, khona-ke kuyoba nzima ukuthi nenze umsebenzi wenu kahle, futhi kube nzima ukuwenza ngendlela evumelana nenjongo kaNkulunkulu; kulokhu kukhona kokubili ukukhohlisa kanye nesimo sengqondo sokugcina nje icala—kunzima kakhulu, futhi kunokungahlanzeki okuningi kakhulu. Kodwa ungakhathazeki ngalokhu. Okokuqala, xazulula izinhloso nezifiso zakho, khona-ke kancane kancane isimo sakho sangaphakathi siyothuthuka. Okokuqala lungisa isimo sakho, sithuthukise, futhi izinto ezinhle ezingaphakathi kwakho ziyokhula, futhi isimo sakho sizoshintsha sibe ngcono. Ngale ndlela, ukungahlanzeki ekwenzeni umsebenzi wakho kuzoncipha, inhliziyo yakho izoba msulwa futhi ibe lula ngokwengeziwe, futhi uzokwenza umsebenzi wakho kahle ngoba ufisa ukuwenza kahle. Ngale ndlela, kuzoba nzima ngezinto ezonakalisayo zikaSathane, njengemibono yemicabango kanye namafilosofi, ukuba kukulawule, futhi uzoya ngokuya ukhululeka, uye ngokuya uzola futhi ujabula. Cabanga ngomuntu othwele imithwalo emhlane wakhe: igedlela, ibhodo lokupheka, i-spatula, kanye nokhezo, futhi uthwele izikhwama ezimbili bese edonsa nezingane ezimbili. Umsindo wokuhhudlana kwezitsha njengoba ehamba wenza kuhambisane nezingane ezibiza umama noma ubaba wazo. Yiluphi uhlobo lomzwelo uhambo lwakhe olunjengalolu olukunika wona? Uyasindwa, akakhululekile neze, futhi umzimba wakhe ucindezelekile. Uma befika lapho beya khona bese ekugcineni esusa lezi zinto, khona-ke angazizwa kanjani? Masinyane umzimba wakhe uzoba lula futhi uzomangala ukuthi bekulula kangakanani ukuhamba njalo ngaphandle kwaleyo mithwalo! Yilona umuzwa womuntu othola ukukhululwa kanye nomuzwa wokumuntu othola inkululeko. Ngosuku lapho nithola khona ukukhululeka nenkululeko yangempela, bhalani ngalokho encwadini yenu yezehlakalo noma amanothi okuzinikela. Bhalani konke: yimiphi imithwalo eniyibeka eceleni nsuku zonke, yiziphi izinhloso eniziyekayo, kukuziphi izinto lapho niye nashiya khona izinhloso nezisusa zenu siqu, inhliziyo yenu ibe namiphi imizwa njengoba nenza kanjalo. Bhalani ukuthi yikuphi ukukhanyiseleka enikutholile kanye nokuthi isimo senu siye sathuthuka kanjani. Kubhaleni konke lokhu phansi. Ngosuku othola ngalo ukukhululeka kanye nenkululeko ngokuphelele futhi ungasenalo noma yimuphi uhlobo lomthwalo noma ukugqilazeka, uzoba umuntu okhululekile—uzoba umuntu ofana noJobe. Kungani uJobe asho lokho akusho? Kungani wayengasho kalula nje lawo mazwi? Ingabe kwakuyindaba yangosuku olulodwa? Kwakungeyona indaba yangosuku olulodwa. Kwaba umphumela wezinsuku eziningi, iminyaka eminingi yokusolwa, neyokuyeka, kancane kancane. Lapho ubekela eceleni ngokwengeziwe uzokhululeka ngokwengeziwe—ukubeka eceleni okwengeziwe ukhululeka okwengeziwe. Uzokhululela futhi ube nenkululeko. Ngosuku ozokhululeka futhi ube nenkululeko ngalo, uzozwa ukuthi izinto ozishiyile ziyathandela, kanti izinto ozitholile ziyigugu elikhulu ngempela kuwe. Uzozwa ukuthi lezo yizinto ezibaluleke kakhulu futhi ezifanele ngokuphelele ukuba uzilonde. Lezo zinto obukade uzithanda—izinjabulo zenyama, udumo nengcebo, isikhundla, imali, ukuvelela, kanye nokudunyiswa abanye—kuzobonakala kungelutho kuwe. Lezo zinto zikwenze wahlupheka kakhulu, futhi ngeke uphinde uzifune. Ngeke uzifune ngisho noma unganikezwa zona. Awuzidingi! Okwamanje nisengakabi lapho; manje anikwazi ukulahla lezi zinto. Impilo yakho iyakhathaza kakhulu, ayiyi phambili noma emuva; awufuni ukungancintisani, kodwa lapho uncintisana awuzizwa kahle. Uyayendayenda ekuphileni, uya kancane kwesokudla uphinde uye kancane kwesokunxele, uhamba mazombezombe ngezinyawo zakho. Leso ngokuqondile yisimo esidabukisayo kanye nesibi somuntu owonakaliswe uSathane. Ubonakala ekahle ngaphandle kuyilapho inhliziyo yakhe igaya izibozi ngaphakathi usuku lonke ngendaba ethile engasho lutho. Lolu uhlobo lomuntu ohlakaniphe kakhulu noyiqili! Ubonakala enolwazi olukhulu ngomuntu osemncane kangaka, futhi unokuqonda okujulile; abantu ngeke bambone ngokucacile ngaphandle. “Uyisihlakaniphi esizulazulayo” ngokuphelele. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu ngeke abone noma akwazi lokho abantu abangeke bakubone ngokucacile ngaphandle? (Angakwazi.) Ingabe nikukholelwa ngempela lokhu? (Yebo.) Kungenzeka nimane nithi yebo ukusho uyebo, kodwa qhubekani nithola ulwazi futhi ngelinye ilanga nizoqonda ukuthi umuntu ngokuyisisekelo umane nje unalezo zinto ezilulaza isimo. Kungenzeka ukuthi anicabangi ukuthi lezo zinto ziyathandela. Kufana nesiphukuphuku esifika edolobheni siphethe izikhwama eziningana zempahla bese sigibela ibhasi. Ngemva kokungena ngomnyango omncane ebhasini nazo zonke izimpahla zaso, kanzima, umholeli uyasitshela, “Mngani, beka phansi izikhwama zakho. Akudingeki ukuthi uziphathe uma ususebhasini; kukhathaza kakhulu lokho.” Siyaphendula, “Cha. Ngiyabonga. Ngisindwa ngingedwa ukuthi ibhasi lingangethwala. Usho ukuthi akunakuba nzima ngokwengeziwe yini ngebhasi ukuba ithathe nomthwalo wami? Kungcono ukuthi ibhasi yonge amandla!” Abantu abezwa lokhu yini abayicabangayo? Ngokugibeza yena, ibhasi kakade ithathe nomthwalo wakhe. Akukho umehluko phakathi kokuthi uphethe umthwalo wakhe noma ukuthi uwubeke phansi ebhasini, kodwa usaphikelela ngokuthi azithwalele wona. Ingabe lesi akusona isiphukuphuku? Abanye abavame ukugibela ibhasi bajahela ukuyobeka izimpahla zabo endaweni yokubeka imithwalo ngokushesha nje uma begibela, noma okanye bazibeke phansi. “Sengisebhasini manje. Kukhathaza kakhulu ukuthwala le mithwalo! Ngingaphumula okwesikhashana njengoba sengisebhasini!” Lowo umuntu ohlakaniphile. Isiphukuphuku asisiqondi lesi simiso, futhi siqhubeka nokuthwala umthwalo waso ngisho nangemva kokugibela. Ingabe akukho yini abantu abenza kanjalo? Bakhona. Lesi yisifaniso.
Kwamanje, ukwenza umsebenzi wenu kuyithuba elikhulu kakhulu eninalo. Ningabona indlela yokulahla isimo senu esonakele, indlela yokuthola isiqondiso sikaNkulunkulu, kanye nendlela yokwenza umsebenzi wenu ngokwethembeka. Ningafuna ukuthi ningayenelisa kanjani intando kaNkulunkulu, ningayifinyelela kanjani ekwenzeni umsebenzi ngokungenankohliso, ningawufeza kanjani umthwalo wenu wemfanelo womuntu siqu, kanye nokuthi ningayiphendulela kanjani inhliziyo yenu kuNkulunkulu. Ningathola ukwazi izenzo zikaNkulunkulu futhi nibone izenzo zikaNkulunkulu ngokwenza umsebenzi wenu. Lokhu kuyithuba elikhulu kakhulu! Ngelinye ilanga, ngemva kokuba izimo zenu seziguqukile futhi zingenjengoba zinjalo namuhla, khona-ke ngeke nidabuke lapho nitshelwa ukuthi ngeke nisancintisana ngesikhundla noma nifelane umona noma nincintisane ngokuvelala, futhi ngeke nikucabange. “Lokhu kunzima kakhulu! Ungakulawula kanjani konke ukuphila kwami?” Kunalokho, lapho lokhu kuvezwa, nizothi, “Asikho isidingo sokuqhubeke nokuchaza; akukho kithi oncintisana ngalezi zinto. Sonke sivumelana nezimo futhi asilawulwa yilezi zinto. Azilutho; zonke ziyize, zonke yizinto ezenziwa abangakholwa. Kungani singazange sifinyelele lesi siqu esingokomoya ngemva kokukholelwa kuNkulunkulu isikhathi eside kangaka? Noma ubani ofaneleka kakhulu uyakhethwa, futhi wonke umuntu angenza umsebenzi wakhe ngendlela evamile.
Uma othile ekhuluma njalo amazwi ayiqiniso asehliziyweni yakhe, ekhuluma njalo ngokungagwegwesi, futhi ekhuluma njalo kalula, khona-ke kunethemba ngaloyo muntu. Uma lo muntu njalo ekhuluma ngokugigiyela futhi enikeza njalo isithombe esingesiso kwabanye, khona-ke usengozini nasenkingeni. Ungabona ukuthi anjani amathemba omuntu ngempilo, ngamazwi nangezenzo zakhe zansuku zonke. Uma umuntu njalo enza bese eziphakamisa, khona-ke usengozini futhi akekho endleleni ekahle. Iyiphi indlela eniyithathayo? Ukuthatha indlela yokuba umuntu othembekile akulona iphutha! Ukusingatha kanjani uma abanye bethi uyisiwula? “Uzisho kanjani zonke izinto? Uvumela abanye ukuba bazi konke okucabangayo. Ungaba kanjani isiwula kanjalo?” Uzizwa kanjani ngemva kokuzwa lokhu? (Awunaki.) Lokho kulungile. “Ukunganaki. Ubona izinto ngendlela ofuna ukuzibona ngayo. Ukuba umuntu othembekile kuyindaba yami. Kungumthwalo wami wemfanelo kanye nendlela okufanele ngiyithathe.” Indlela ekahle kakhulu ikholwa okufanele liyithathe ngeke ishintshe futhi ngeke ithonywe abanye. Abantu abalokothi bavule izinhliziyo zabo kodwa njalo bayezemboza, njalo bayazifihla, njalo bayaziphakamisa, njalo bayenza, njalo bafuna ukwenza abanye ukuba bacabange ukuthi bangcono, abafuni ukuba abanye babone ngokucacile imicabango yangempela, izimo zangempela, kanye nemvelo yabo. Ingabe yilolu uhlobo lomuntu oyisiwula? (Yebo.) Iyiphi indlela ayithathayo? (Yindlela yabaFarisi abazenzisayo.) Ingabe indlela yabaFarisi iyingozi? Uhlobo olunjani lwendlela lolu? Yindlela eya ekubhujisweni!
Izinhliziyo Eziqotho Kuphela Ezingathola Iqiniso
Yiziphi izinhlobo zezilingo enikwazi ukuzikhuthazelela manje? Ingabe ningasho ngesibindi ukuthi ninaso kakade isisekelo? Ingabe ningahlala nimile lapho nibhekana nokuvivinywa? Ingabe ningakunqoba, ngokwesibonelo, uvivinyo lwesimo, uvivinyo lwesikhundla noma lwedumela, uvivinyo lwasemshadweni, noma uvivinyo lwezimali? (Singazinqoba ezinye zazo.) Kunamazinga ehlukene okuvivinywa; kukuliphi izinga eninganqoba kulo? Ngokwesibonelo, wazi othile onobuntu obuhloniphekile nonokholo oluqinile kuNkulunkulu, oye wadela ikhaya lakhe nomsebenzi futhi wahlupheka kakhulu. Ngolunye usuku uyaboshwa masinyane bese egwetshwa, kuthi kamuva uzwe ukuthi ushaywe waze wafa. Ingabe lolu uvivinyo lwakho? Ungazizwa kanjani ngokuba phakathi kwalolu vivinyo? Ungaphuma kanjani? Ingabe ungafuna iqiniso uma ubhekene nalesi silingo? Ulifuna kanjani iqiniso, futhi uqiniseka kanjani ukuthi ungamelana nalolu vivinyo, uqonde injongo kaNkulunkulu, futhi uthole iqiniso kulolu vivinyo? Ingabe uke wacabanga ngalezi zinto? Mhlawumbe awesabi lapho uzwa ngokuboswa kothile, futhi mhlawumbe awesabi lapho ubona othile eboshwa, noma lapho ubona othile ehlukunyezwa ngonya, kodwa lapho wena uboshwa, lapho wena siqu ubhekana nalolu hlobo lwesimo, ingabe ungahlala umile? Ingabe lolu akulona uvivinyo olukhulu? Ingabe kulula ukunqoba uvivinyo olunjena? Ingabe lesi akusona yini isilingo esikhethekile? Uphuma kanjani ezilingweni ezikhethekile noma izilingo eziphambana namasiko omphakathi? Ungedlula kanjani ngokushelela kulolu hlobo lovivinyo ngaphandle kwanoma yisiphi isikhalo, ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lombono ngomsebenzi kaNkulunkulu? Ingabe lokhu akukhona okuthile okufanele uhlonyiselwe kona ekuphishekeleni iqiniso? Khona-ke, nikuliphi manje izinga lesiqu esingokomoya? Kungaphezu kwaliphi izinga lovivinyo eningakwazi ukulunqoba? Ingabe nikwazi ngokuqinisekile okungaphakathi kwenhliziyo yenu? Uma ningakwazi, khona-ke kunzima ukuphendula leyo mibuzo. Manje nisanda kuthi, “Singanqoba ezinye zazo.” Lokhu ukukhuluma okudidayo. Kufanele nicace ngezinga lesiqu senu esingokomoya nokuthi yimaphi amaqiniso enihlonyiswe ngawo. Kufanele nazi ukuthi yikuphi ukuvivinywa eningakunqoba kanye nokuthi yiziphi izilingo eningazamukela. Kufanele wazi ukuthi yimaphi amaqiniso okufanele ube nawo ukuze ubhekane nezilingo nokuthi yimaphi amaqiniso okufanele uwaphishekele ukuze ube umuntu owanelisa uNkulunkulu. Kufanele uqaphele lezi zinto. Lapho ezinye izindaba kanye nezinto ezivamile zikwehlela, lezo abantu abavame ukubhekana nazo, lezo abavame ukukhuma ngazo, futhi lezo umqondo womuntu ozilungiselele, ungazinqoba lezo ezidinga ukuqina kwemibono nemicabango yomuntu. Kodwa, uma ubhekana nesiye isehlakalo esingavumelani nemibono kanye nemicabango yakho, khona-ke uphuma kanjani kuso? Ungazihlomisa kanjani ngeqiniso, futhi yiziphi izinhlobo zeqiniso okufanele uhlome ngalo ukuze usedlule ngokushelela leso sehlakalo? Ingabe lokhu yinto okufanele ifunwe? Yikuphi okunye ukuvivinywa okuvamile enihlangabezana nakho? Isikhundla, idumela, ukuba nobudlelwane nabobulili obuhlukile—ngokuyisisekelo konke lokhu kuvamile. Ngalokhu kuvivinywa okuvamile, esiqwini senu esingokomoya samanje, yikuphi kwalokhu kuvivinywa eningakwazi ukubhekana nakho futhi nenze umsebenzi wenu kahle, ngaphandle kokungenzi lutho oluphambene neqiniso, ngaphandle kokungenzi lutho ephazamisayo noma ethikamezayo, ngaphandle kokungenzi lutho emelana noma ewukungamlaleli uNkulunkulu, ngaphandle kokungenzi lutho ezwisa ubuhlungu inhliziyo kaNkulunkulu? Ingabe ikhona indlela yokwenza lokhu? Ngakolunye uhlangothi, zihlole futhi uzibheke wena bese ubona ukuthi kukhona yini okuthile ngaphakathi kuwe okumelana noNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, kufanele futhi ufune njalo iqiniso futhi ubone ukuthi izenzo zakho ziyavumelana yini neqiniso, injongo kaNkulunkulu, kanye nezimfuneko zikaNkulunkulu. Kufanele ubone noma izenzo zakho ziyabonisa yini ukucabangela injongo kaNkulunkulu nokuthi ziyalenza yini iqiniso. Kufanele ufinyelele zombili lezi zinto: Kufanele ufinyelele ekungeneni kuzo zombili lezi zinto ekwenzeni nasekwazini. Ngale ndlela, umuntu angawenza kahle umsebenzi wakhe.
Abanye bathi, “Isikhathi esiningi lapho ngibhekene nokuvivinywa, angikwazi ukufuna izimpendulo, futhi lapho ngizifuna angizitholi.” Kukhona nabanye abathi, “Kunezikhathi eziningi lapha ngiye ngathandaza, futhi ngafuna, ngase ngilinda, kodwa kwangabi khona imiphumela. Angazi ukuthi kufanele ngenze kanjani. Ngiphenya izwi likaNkulunkulu, kodwa linokuningi kakhulu, futhi angazi ukuthi yiziphi izingxenye ezisebenzayo noma ukuthi kufanele ngenze kanjani.” Nasi indinganiso esiyisisekelo kakhulu, leyo engasebenza njengomzamo odingekayo lapho nibhekene nezinto eziningi eningazi ukuthi ningazisingatha kanjani. Iyindinganiso encane eyisisekelo kakhulu okufanele nibambelele kuyo, futhi iyisimiso okufanele nisenze. Ingabe niyazi ukuthi yini? (Ukuvula kakhulu inhliziyo yethu kuNkulunkulu nokukhuluma iqiniso kuNkulunkulu futhi sizithobe.) Kuncike kuphi lokhu? Kunendinganiso eyisisekelo kakhulu. Umuntu ngamunye wenza ngokuvumelana nani? (Ngokuvumelana nonembeza.) Kubonakala sengathi ninolwazi oluthile; nikhuluma kahle impela. Ngakho, lingakanani ithonya unembeza oba nalo ngaphakathi kumuntu? Kuncika ebuntwini bomuntu. Ukuthi ingakanani indima unembeza wakho ongaba nayo lapho ungaqondi iqiniso kuncika ekutheni ubuntu bakho bunjani. Uma umuntu othile enza izinto ngokungaqonda iqiniso kodwa angenzi ngokuvumelana nonembeza ukuze ungaboni indawo kulokho akwenzayo ukuthi kuyabonisa yini ukucabangela injongo kaNkulunkulu futhi ungeke wabona ingxenye yenhliziyo yakhe ehlonipha uNkulunkulu—uma ungeke wakubona lokhu, khona-ke ingabe lo muntu unawo unembeza? Lo muntu akayena umuntu ononembeza. Ingabe umuntu onjalo unabo ubuntu? (Cha.) Khona-ke luhlobo luni lomuntu lolu? Incazelo enembile iwukuthi lolu hlobo lomuntu alunabo ubuntu futhi selungaphansi kwendinganiso encane yesintu. Akanawo unembeza, futhi wenza izinto ngokungacabangi nangokungavumelani nonembeza. Abanye bathi, “Kunamaqiniso amaningi kakhulu engingawaqondi. Angazi ukuthi yini into elungile ukuba ngiyenze, futhi angiziqondi izimiso.” Khona-ke, yini okufanele yenziwe? Indinganiso ephansi kakhulu ukuthi umuntu kufanele eze ngokuvumelana nonembeza. Umuntu wenza kanjani ngokuvumelana nonembeza? Imininingwane yokulandela unembeza iba ngesikhathi umuntu enza, kufanele enze ngokwethembela enhliziyweni yangempela futhi aphile ngokuvumelana nendlela uNkulunkulu anikeze ngayo lokhu kuphila kanye nethuba lokuthola insindiso. Ingabe lokhu akukhona ukusebenza kukanembeza? Uma usunalesi sisekelo uzobe ususitholile isivikela, khona-ke ngeke yini kungabi lula ukwenza izinto ukuze ungalaleli uNkulunkulu noma ubalekele umthwalo wakho wemfanelo? Khona-ke ngeke kalula umane nje wenze ngendlela yokugcina icala noma ukhohlise, futhi ngeke uwele kalula ekulweleni isikhundla, udumo, inzuzo, kanye nekusasa lakho siqu—lena yindima kanembeza. Izingxenye eziyisisekelo nezibaluleke kakhulu zobuntu bomuntu unembeza kanye nokucabanga. Uma umuntu entula unembeza futhi engenakho ukucabanga kobuntu okuvamile, khona-ke uba uhlobo olunjani lomuntu? Empeleni, ungumuntu ongenabo ubuntu, umuntu onobuntu obubi. Uma sikhuluma ngokuqondile, lo muntu ukubonisa kanjani ukuba nobuntu obonakele okwenza ukuthi abantu bathi akanabo ubuntu? Ake sihlaziye izici zalolu hlobo lomuntu. Hlobo luni lwezici bonke labo bantu abanazo? Ngokukhethekile yiziphi izimpawu ababanazo? (Ubugovu nokuxegelwa yisimilo.) Ubugovu bungolunye uhlobo uphawu, nokuxegelwa yisimilo kungolunye. Ngaphezu kwalokho, uziphatha kanjani kulezi zenzo? Akenzi ngobuqotho futhi uyakhohlisa, akanandaba futhi akanendaba nezinto angenaso isithakazelo somuntu siqu kuzo. Akacabangi ngezithakazelo zendlu kaNkulunkulu futhi akabonisi ukucabangela injongo kaNkulunkulu. Akathathi umthwalo wokufakazela uNkulunkulu noma ukwenza umsebenzi wakhe futhi akazizwa enecala ngokungenzi njalo. Yini acabanga ngayo? (Ucabanga ngezithakazelo nezinzuzo kanye nokulahlekelwa kwakhe siqu.) Into yokuqala ayicabangayo ukuthi, “Ingabe uNkulunkulu uzokwazi uma ngenza lokhu? Ingabe kuyabonakala kwabanye abantu? Uma abanye abantu bengaboni ukuthi ngenza lokhu, ukuthi ngenza wonke lo mzamo futhi ngiziphatha ngokufanele, futhi uma uNkulunkulu engakuboni lokhu, khona-ke akusizi ukuzikhandla kwami noma ukuhlupheka ngalokhu!” Ingabe akukhona ukuba nobugovu lokhu? Ngesikhathi esifanayo, kuphinde futhi kube yisizinda sangempela senhloso. Lapho ecabanga futhi enza ngale ndlela, ingabe ikhona noma iyiphi indima edlalwa unembeza? Ingabe ikhona noma iyiphi ingxenye kanembeza kulokhu? Ingabe ayikho indima noma ingxenye kanembeza lapho? Kukhona ngisho nabanye abantu ababona inkinga futhi bahlale bathule. Bayabona ukuthi abanye bayaphazamisa futhi bayathikameza kodwa abake bakhulume futhi abenzi lutho lokumisa lokho. Abacabangi nakancane ngezithakazelo zendlu kaNkulunkulu, abacabangi nakancane ngomsebenzi noma umthwalo wabo lowo abanesibopho ngawo. Bayenza, babonakale, benze umzamo, basebenzise amandla, futhi bakhulumele kuphela ukuzazisa, ukuvelela, isikhundla, izithakazelo, kanye nedumela labo siqu. Izenzo kanye nezinhloso zomuntu onjalo zisobala kuwo wonke umuntu: Uvela noma nini lapho kunethuba lokudunyiswa noma lokujabulela izibusiso ezithile. Kodwa, lapho kungekho ithuba lokudunyiswa, noma ngokushesha lapho kuba nesikhathi sokuhlupheka, ufaka ikhanda phakathi njengofudu olwesabayo. Ingabe lolu hlobo lomuntu lunaye unembeza kanye nokucabanga? Ingabe umuntu ongenaye unembeza kanye nokucabanga oziphatha ngale ndlela uzizwa enokuzisola? Unembeza walolu hlobo lomuntu awufezi lutho, futhi akakaze azizwe ezisola. Ngakho, ingabe angazizwa enamahloni noma eyalwe uMoya oNgcwele?
Uhlobo olunjani lomuntu uMoya oNgcwele ovame ukusebenza kulo? Okungenani yini umuntu okufanele abe nayo? Okungenani kufanele abe nonembeza. Okungenani kufanele abe nenhliziyo eqotho. Ingabe ikhona ingxenye eqotho kanembeza? Ingabe unembeza unayo ingxenye yobuqotho? Okokuqala-nje kufanele ube qotho. Abantu njalo bathi uNkulunkulu ubheka ngokujulile enhliziyweni, bathi Yena uhlola yonke into, bathi abantu babheka ukubukeka kwangaphandle kodwa uNkulunkulu ubheka okusenhliziyweni. Kodwa, abantu abazi ukuthi kungani abanye abantu bengakutholi ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele, kungani bengatholi umusa, kungani bengenayo injabulo, kungani njalo benombono ophambeni futhi becindezelekile futhi bengabi nawo umbono okahle. Ngakho, ake ubheke izimo zabo. Lokhu kunjalo ngempela kumuntu ngamunye onjalo: Abanawo unembeza osebenzayo futhi abanazo izinhliziyo eziqotho. Labo bantu abahlala njalo benokuthula nenjabulo, abashiseka njalo futhi bathuthuke ekwenzeni umsebenzi wabo, abathola njalo okuthile, abanokuqonda njalo, abazothola njalo okuthile ngemva kwesikhathi esithile—ingabe lolu hlobo lomuntu lumane nje lucabange izinto oluzitholayo? Ingabe zifundwe encwadini? Zitholakala kanjani? (Zitholakala kancane kancane ngokuba nokuhlangenwe nakho.) Khona-ke, kungani abangakholwa bangazizwa lezi zinto? Ingabe umsebenzi woMoya oNgcwele ungashiywa ngaphandle? Ngeke, akanjalo? Umsebenzi woMoya oNgcwele ubalulekile. Uma unenhliziyo eqotho nonembeza kanye nenjongo leyo ubuntu bakho okufanele bube nayo, khona-ke uNkulunkulu uyakubona lokho. Ingabe niye nabona indlela uMoya oNgcwele osebenza ngayo, kuba njani lapho inhliziyo yomuntu ngokukhethekile iqotho izomshukumisa ngayo, athole ukungena, futhi izinto zizomhambela ngokushelela lapho enza? Ngenxa yokuthi unalo muzwa, ingabe awazi ukuthi uhlobo olunjani lomuntu uMoya oNgcwele osebenza kulo? Uma othile eqotho kakhulu kodwa okwesikhathi esithile inhliziyo yakhe isuke kuNkulunkulu futhi angafuni ukuthuthuka, bese ewela esimweni esiphambene futhi angaphumi kuso futhi angabambisani—khona-ke uMoya oNgcwele awusebenzi kuye phakathi nesikhathi sobumnyama besimo sakhe noma ukuwohloka okwesikhashana; khona-ke kungenzeka kanjani ngomuntu ongenaso isidingo sobuntu ukuba uMoya oNgcwele usebenze kuye? Akunakwenzeka ngisho nangokwengeziwe. Yini uNkulunkulu ayenzayo ngalaba bantu abangenakho nokuncane ukucabanga komuntu noma unembeza? UNkulunkulu akabanaki. Ngakho, ingabe laba bantu banayo yini indlela yokuphuma? (Kufanele baphenduke ngobuqotho.) Kufanele baphendule ngobuqotho. Baphenduke kanjani? (Kufanele babe umuntu oqotho.) Ukubonisa kanjani ukuthi ungumuntu oqotho? Okokuqala, inhliziyo yakho kufanele ivulekele uNkulunkulu, futhi kufanele uphendukele Kuye nsuku zonke, njalo ngomzuzu, nanjalo ngomzuzwana ngamunye ukuze Yena akunake. Okokuqala kufanale ubeke eceleni izifiso zakho zokuvelela, ukuzazisa, kanye nezithakazelo zakho. Qala ngokuzama ukubeka eceleni lokhu, futhi ngemva kokuba ukubeke eceleni, sebenzisa umzimba wakho wonke nomphefumulo ekwenzeni umsebenzi wakho kanye nasekufakazeni ngoNkulunkulu. Khona-ke, ubone indlela uNkulunkulu akuhola ngayo, ubone ukuthi kukhona yini ukuthula ngaphakathi kuwe, noma ikhona yini injabulo, noma zikhona yini lezi ziqinisekiso. Okokuqala kufanele uphenduke ngoboqotho. Kufanele okokuqala uzinikele bese ubeka eceleni izinto ozithandayo kanye nozazisayo. Uma ungazibeki eceleni kodwa uqhubeka nokuzenza lezo zinto ngesikhathi usaqhubekela nokufuna ukwenza izicelo kuNkulunkulu, ingabe ungakuthola ukusebenza koMoya oNgcwele? Umsebenzi woMoya oNgcwele unombandela, futhi uNkulunkulu unguNkulunkulu ozonda okubi futhi omsulwa nongcwele. Uma abantu njalo benza lezi zinto futhi bezivalela bona kuNkulunkulu, njalo benqaba umsebenzi nesiqondiso sikaNkulunkulu, khona-ke uNkulunkulu uzoyeka ukusebenza kubo. UNkulunkulu akudingeki ukuba asebenze ngaphakathi komuntu ngamunye futhi ngeke akuphoqe ukuba wenze lokhu noma lokhuya. Akakuphoqi. Umsebenzi womoya ababi ukuphoqa umuntu ukuba enze lokho nalokhuya. UMoya oNgcwele usebenza ikakhulu ngomusa. Uyakushukumisa futhi awukuzwa lokho, umane uzizwe sengathi ufinyelele ngokuzenzakalelayo ekuqondeni noma ekuboneni okuthile. Ngakho, lolu hlobo lomuntu kufanele luphenduke ngobuqotho, noma uMoya oNgcwele ngeke usebenze kuye.
Yiziphi izimpawu zokuziphatha ezivezwa ukuguqulwa kwenhliziyo yomuntu? Yiziphi izenzo ezibandakanyeka ngokuqondile? Ukuthi ubeke eceleni lezi zinto ezingase zikubophe: ukuvelela, idumela, kanye nesikhundla. Ubeka eceleni zonke lezi zinto okungenzeka zikuvimbele ekubeni uze phambi kukaNkulunkulu. Awuthwele umthwalo kodwa kunalokho woza phambi kukaNkulunkulu ngezandla zombili ezingenalutho ukuze uzokwemukela umsebenzi wakho futhi uvumele uNkulunkulu asebenze kuwe nokuba akuqondise. Uma unale nhliziyo eqotho, khona-ke ngokushesha lapho uNkulunkulu eyibona, uMoya oNgcwele uzosebenza. Okokuqala kufanele ube nalolu hlobo lokuphenduka okuqotho kanye nalezi zinhlobo zezenzo. Inhliziyo yakho kufanele iqale ukwenza, kanti nawe kufanele uqale ukwenza. Ngeke uthi, “Ngizokwenza lokhu bese uNkulunkulu enza lokho akuthandayo—noma ngabe yikuphi, ngenza lokhu.” Lolu uhlobo olunjani lwesimo sengqondo? Uhlobo olunjani lwesimo lolo? (Ukwenqaba ngokungalwi.) Lokhu ukwenqaba. Lokhu ukungalaleli. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu kufanele akusindise? Ukuthi ngeke ushiywe? Ingabe kunjalo? Kungani umsebenzi kaNkulunkulu wedluliselwa kwabeZizwe futhi kungani ungasekho ku-Israyeli; ingabe niyazi? Labo abanonembeza kanye nokucabanga abanalutho abangaqhosha ngakho; abanakho kuphela unembeza omncane, ingxenye encane kakhulu eyisisekelo yobuntu. Ngeke baphile esimweni sokunganaki kodwa kufanele bathandaze njalo futhi bahlole ukuthi ingabe izenzo zabo zingezenhliziyo eyesaba uNkulunkulu yini nokuthi ingabe izenzo zabo ziyayenelisa yini inhloso kaNkulunkulu futhi ziyavumelana yini neqiniso. Kungakhathaliseki ukuthi ubuntu bakho buhle kangakanani, kungakhathaliseki ukuthi ukucabanga kwakho kuhle kangakanani kanye nonembeza onawo, ukufuna komuntu iqiniso ngobukhona bukaNkulunkulu akupheli. Kunabantu abathile abanobuntu obuhle abanonembeza omncane kakhulu, kodwa akwanele. Yini okufanele bayenze? Kufanele bazihlole kuzo zonke izici. Abanye bathi, “Ngingumuntu okahle, futhi ukulinganisela kungumgomo wami kanye nesimiso engenza ngaso yonke into ekuphileni kwami.” Kungase kubonakale sengathi lo muntu enobuntu obukahle, ukuthi unesizathu esizwakalayo kuzo zonke izici. Ezikhathini eziningi akakhulumi futhi akawuvezi umbono wakhe. Unjani umuntu onjalo? Umuntu angalokothi akhulume noma aveze noma yimuphi umbono wakhe akabonisi ukuthi unaso isizathu. Ngokuphambene, abantu bathi, lolu hlobo lomuntu, lukahle kakhulu ekuzenziseni, bathi ufihla izinjongo zakho, futhi bathi unengqondo ekhaliphile. Ingabe ungavuleka kuNkulunkulu uma ungavulekile kwabanye abantu? Uma ungabeki izinto obala noma ungavulekile kwabanye abantu, ingabe ungumuntu oye waguqukela kuNkulunkulu ngenhliziyo yakho ngempela? Eqinisweni akunjalo. Njengoba uMoya oNgcwele usebenza ukukukhanyisela ukuze uqonde okuthile, ngezinye izikhathi kushesha kakhulu. Ngezinye izikhathi, ukwenza ube nokuhlangenwe nakho isikhathi esithile bese ekuvumela ukuba uqonde kancane kancane. Akukhona ukuthi akakuvumeli ukuba ubone okuthile futhi akuvumele ukuba uqonde amazwi ambalwa angelutho. Yiziphi izimiso osebenza ngazo uMoya oNgcwele? UMoya oNgcwele usebenza ngesimiso sokuhlela isimo sakho kanye nokuhlela abantu, izilingo, kanye nezinto ukuze ukuvumele ukuba uvuthwe phakathi kwabo futhi uqonde iqiniso kancane kancane njengoba uhlangabezana nazo. Awuzembuli noma uzikhanyise kuwe ngokuqondile noma ukwenze ukuthi ube nokukhanya okuncane. Awukunikezi amazwi angelutho kanye nezimfundiso. Kunalokho, ukuvumela ukuba uzifunde, uvuthwe, futhi kancane kancane ukhule ngokuhlangabezana nezilingo ezehlukene, izimo kanye nabantu abehlukene, izehlakalo, kanye nezinto. Ukubangela ukuba kancane kancane uqonde iqiniso ngale nqubo yokukhula. Ngakho, ingabe uMoya oNgcwele awusebenzi ngesimiso esingokoqobo? Usebenza ngokuvumelana ngokuphelele nendlela yokuzenzakalela kobuntu, ngaphandle kokucindezelwa. Ngokwesimiso nangezinga lomsebenzi woMoya oNgcwele, uma umuntu engenakho nakancane ukucabanga komuntu kanye nonembeza okufanele abe nawo, khona-ke ingabe angawuthola umsebenzi woMoya oNgcwele? Ingabe angathola isiqondiso nokukhanyiselwa uNkulunkulu? Ngisho ukuthini ngalokhu? Abantu njalo bathi bafuna iqiniso, bathi baliqonda kakhulu iqiniso, kodwa kunokuthile abangakunaki. Yini abayicabangayo? “Ukuthi ubuntu bami buhle noma bubi, ukuthi nginaye unembeza noma anginaye, ukuthi inhliziyo yami ngiyinikele kuNkulunkulu noma cha, ngizomane ngifune kakhulu iqiniso.” Ukulifuna kanjani? “Ngokulalela kakhulu, ngokubhala kakhulu, ngokufunda kakhulu, bese kuba ukwenza umsebenzi wami kakhulu, ukwenza umzamo kakhulu, kanye nokuhlupheka kakhulu, futhi konke kuzolunga.” Umuntu onjalo akakaboni futhi akazazi izisekelo zokuyisisekelo esikhulu. Manje uyaqonda?
Okungenani kuyini umuntu okufanele abe nakho uma efuna ukuqonda kanye nokuthola iqiniso? (Unembeza kanye nokucabanga.) Ukusho kanjani kalula ukuthi kuyini ukuba nonembeza kanye nokucabanga? Kuwukuthi okungenani umuntu kufanele abe nenhliziyo eqotho. Ziyini izimpawu zokuba nenhliziyo eqotho? Lokhu engisanda kukusho ngomuntu onobuntu obuhle, inhliziyo eqotho, ukuba nonembeza kanye nokucabanga—lezi akuzona izinto ezingaqondakali nezingezona ezingokoqobo ongeke uzibone noma uzithinte. Ungathola noma kuphi ekuphileni kwansuku zonke ukuthi lezi zonke yizinto ezingokoqobo. Ukuthi umuntu mkhulu; ingabe lokho kuyinto ongayibona? Ngeke ukubone. Ukuthi umuntu uphelele; ingabe lokho kuyinto ongayibona? Ngeke ukubone noma ukuthinte; ngeke uze ngisho ucabange ukuthi kuyini ukuphelela noma ukuba mkhulu. Kodwa, uma othile kucatshangwa ukuthi unobugovu, ingabe ungazibona izenzo zalowo muntu, futhi ingabe zingafanelana nencazelo? Uma othile kucatshangwa ukuthi unenhliziyo eqotho, ingabe yilokhu ukuziphatha ongakubona? Uma othile kucatshangwa ukuthi uyiqili, uyisigebengu, mubi, noma unobugovu, ingabe ungakubona lokho? Ngisho noma uvala amehlo akho, ungaqonda ukuthi ubuntu bomuntu buphansi noma buphakeme ngalokho ukushoyo kanye nangendlela enza ngayo. Ngakho, “Ubuntu obuhle noma obubi” akuyona inkulumo eyize. Izincazelo ezinjengethi “ubugovu nobubi,” “ubugebengu nobuqili,” noma “ukuzidla nokunamathela embonweni wakho” yizo zonke izinto ungaziqonda ngokuphila okungokoqobo lapho uhlangana nomuntu; lezi yizici ezimbi zobuntu. Ngakho-ke, ingabe izici ezinhle zobuntu lezo abantu okufanele babe nazo—ukwethembeka, uthando lweqiniso—kufanele zibhekwe ekuphileni kwansuku zonke? Ingabe ungabona futhi wehlukanise noma umuntu unakho yini ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele, noma angakuthola yini ukuqondiswa uNkulunkulu nokuthi ingabe uMoya oNgcwele uyasebenza yini ngaphakathi kuwe noma cha? Kungabonakala kanjani lokhu? Ungabona ukuthi ikhona ngempela imfanelo yobuntu bomuntu ngokusebenzisa izindinganiso ezimbili okuwukuthi indlela yakhe yokuphila kanye nendlela enza ngayo izinto. Lapho uhlangana nomuntu, kufanele okokuqala ubheke imfanelo yakhe yobuntu ukunquma ukuthi unjani, bona noma unguye yini umthandi weqiniso, noma angalemukela yini iqiniso, nokuthi angalithola yini iqiniso. Uma umlomo womuntu ugcwele amazwi amnandi kanye nolimi olumnandi kodwa angenzi ngokwethembeka—lapho kufika isikhathi sokwenza, ukuba enze ngempela, uzicabangela yane kuphela futhi akalokothi acabangele abanye—luhlobo luni lobuntu lolu? (Ubugovu nokuxegelwa yisimilo. Akanabo ubuntu.) Ingabe kulula ngomuntu ongenabo ubuntu ukuba athole iqiniso? Kunzima ngaye ukuthola iqiniso. Ngokushesha lapho kufika isikhathi sokuhlupheka noma sokuzidela okuthile, ucabanga lokhu, “Nina qhubekani kuqala ngokuhluphela kanye nokuzidela. Qhubekani futhi lapho imiphumela isitholakele ngizofika.” Luhlobo luni lobuntu lobu? Lezi zenzo njengeqembu zaziwa ngokuthi “ukungabi nabuntu.” Wonke umuntu unesimo esonakele, kodwa abantu abathile banonembeza osebenzayo futhi bezwa benokuzisola lapho bebhekana nesilingo esithile. Nakuba bengasho ngokoqobo ukuthi, “Ngifuna iqiniso nokuba ngibe ngumuntu okahle,” kodwa basacabanga, “ngeke ngenze ngaleyo ndlela. Kumelwe ngifanelwe umusa kaNkulunkulu nokungikhetha kwakhe.” Unembeza wabo wenza lo msebenzi. Ngakho-ke, ingabe umuntu onjalo wenza iqiniso uma unembeza wakhe usebenza kanjena? Eqinisweni, akenzi ngempela iqiniso, kodwa usendleleni yokwenza iqiniso, okuyinto ekahle, khona-ke kulula ngaye ukuthola iqiniso. Lesi yisisekelo esizedlula zonke ngobukhulu sokuba umuntu athole iqiniso. Abanye abantu baqhubekela phambili lapho bebhekene nesilingo, futhi abanye bayahlela. Abanye bayaqasha lapho bebhekene nengozi, futhi abanye bavikela abanye, baphikelele phambili. Lapho bebhakene nesilingo, abanye abantu bayakhuthazela futhi bavumelane nezimo, futhi abanye bayalwa futhi bancintisane. Lena yindlela ongabona ngayo imfanelo yobuntu bothile. Ingabe akukho yini ukwahlukana kobuntu?
Nonke niye nenza isinqumo futhi nafunga phambi kuNkulunkulu: Nginika uNkulunkulu ukuphila kwami; Nginikezela ukuphila kwami konke kuNkulunkulu futhi akukho lutho engizifunela lona. Kodwa, abantu abanobuntu obubi baphikisana njalo, balwa njalo, ababacabangeli abanye futhi abanakho ukuzithiba. Ingabe kulula ngothile ongakaze enze ngokuvumelana nonembeza ukuba athole iqiniso? Khona-ke, yiluphi uhlobo lomuntu okulula ngaye ukuba apheleliswe uNkulunkulu nokuba athole iqiniso? Ingabe nike nakuzwa lokhu? (Abantu abanobuntu obuhle.) Kufanele kube nendinganiso “yobuntu obuhle.” Akukhona ukuthatha indlela yokulinganisela. Futhi akusikho ukukhuluma kabi ngabanye. Futhi akusikho ukweba izinto zabanye kodwa ukupha njalo. Lokhu akuyona indinganiso, ngakho iyini indinganiso? Ukuba nenhliziyo eqotho kumuntu, ezilingweni nakuNkulunkulu—wonke umuntu angakubona lokhu futhi akuzwe, futhi, ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu angakubona. Abanye abantu baziphakamisa njalo njengezibonelo zokuba nobuntu obuhle, bathi abazange benze into embi, abazange bantshontshe izinto zabanye, abazange bathathe izinto zabanye, futhi banikeza njalo abanye ithuba ngesikhathi bona bethola ukulahlekelwa futhi abalokothi bakhulume kabi ngabanye. Nokho, ngesikhathi benza umsebenzi wabo endlini kaNkulunkulu, bafihla inzondo futhi bagweme umthwalo wemfanelo, bazicabangela bona ngaso sonke isikhathi, abacabangi ngezithakazelo zikaNkulunkulu futhi abakhathazeki noma bacabange ngalokho uNkulunkulu akhathazeka ngakho noma akucabangayo, futhi akukho abangakubeka eceleni okuyisithakazelo zabo ukuze benze umsebenzi wabo. Abakazishiyi izithakazelo zabo. Uhlobo olunjani lobuntu lolu? Lobu akusibo ubuntu obuhle. Ungakulaleli lokho okushiwo umuntu onjalo; kufanele ubheke indlela yakhe yokuphila, ubheke lokho akubonisayo, ubheke ukuthi isimo sakhe sengqondo ukuthi sinjani lapho enza imisebenzi yakhe, nokuthi isimo sakhe sangaphakathi sinjani kanye nokuthi yini ayithandayo. Uma uthando lwakhe ngodumo nangengcebo yakhe kwedlula izithakazelo zikaNkulunkulu, uma uthando lwakhe ngodumo nangengcebo yakhe kwedlula ukucabangela kwakhe uNkulunkulu, khona-ke ingabe lolu hlobo lomuntu ungumuntu onobuntu? Akayena umuntu onobuntu. Ukuziphatha kwakhe kungabonwa abanye futhi kungabonwa nawuNkulunkulu, ngakho kunzima kakhulu ngomuntu onjalo ukuthola iqiniso. Ingabe manje seniyaqonda ukuthi uhlobo olunjani lomuntu ongathola iqiniso? Nonke nifuna iqiniso. Nihlangana ndawonye futhi nenze imisebenzi yenu ndawonye. Isikhathi senu sokwenza imisebenzi yenu cishe sonke siyafana. Niye nakholelwa kuNkulunkulu cishe isikhathi esilinganayo futhi nonke niye nafunda cishe inani elilinganayo lezwi likaNkulunkulu. Nonke niye nahlangabezana cishe nokuhlupheka okulinganayo, futhi cishe ninokuzimisela okulinganayo. Izifungo enazenza ekuqaleni cishe ziyafana, kanti nobudala benu bucishe bufane. Ningabantu abanezinga elifanayo. Ubuntu benu kuphela obunahlukanisayo. Luhlobo luni lomuntu okulula ngaye ukuthola iqiniso? (Umuntu onenhliziyo enhle ngakuNkulunklu, othembekile futhi onobuntu, unembeza, kanye nokucabanga.) Lokhu kubaluleke kakhulu; lokhu kuqinisekile.
Manje njengoba seniqonda lokho, cabangani ngalokhu: Ingabe ukuthola iqiniso kunokuthile kokukwenza ngezinga lomuntu, imfundo, isizinda sokuzalwa, ubudala, noma isimo somkhaya? Ingabe kunokuthile kokukwenza ngamathalenta omuntu? Ngamakhono anawo? Ngokubukeka kwakhe? Ingabe lezi zinto azihlobene neze nokuthola iqiniso? Ngokuyinhloko azihlobene. Abanye abantu banezinga eliphansi kodwa bathembekile futhi baqine ngaso sonke isikhathi ezenzweni zabo; babonakala bezenza kabi kakhulu izinto, kodwa nokho bathola isu kulokho abakwenzayo, futhi imiphumela iba mihle kakhulu. Akekho ongakucabanga lokho, futhi abakukholelwa, “Kungani angathola imiphumela enje?” Khona-ke abanye abantu baba nomona, kodwa ingabe sikhona ngempela isizathu somona onjalo? Lutho. Ubani onezwi lokugcina kulokhu? (UNkulunkulu.) Konke lokhu kusezandleni zikaNkulunkulu; kufanele ulibone ngokucacile leli phuzu. Zonke izinto kanye nezindaba zisezandleni zikaNkulunkulu, kufanele ukukholelwe lokhu. UNkulunkulu unika umuntu umusa futhi amvumele ukuba aqonde iqiniso, ngaphandle kokunaka ukubonakala komuntu noma ukuthi angakwazi ukuzikhulumela noma ukukhuluma kahle, futhi ngaphandle kokunaka ukuthi ufunde noma unekhono kangakanani. Abanye bathi, “Angikwazi ukukhuluma; bheka ukuthi abanye baqephuza kanjani, njengamajuba. Ngimubi kakhulu, futhi angimude. Angikona lokho engenzelwa ukuthi ngibe yikho? Injani indlela yalokhu kucabanga? Sinjani isimo sangaphakathi somuntu onalo mbono? Akukhona yini ukungamqondi kahle uNkulunkulu? Akukhona yini ukungabi nalwazi ngenjongo kaNkulunkulu? Umuntu onombono onjalo akalaleli futhi akayiqondi injongo kaNkulunkulu. Ucabanga ukuthi obani abantu uNkulunkulu abaphelelisayo nabasindisayo, abakhanyiselayo kanye nabaqondisayo? Ingabe ucabanga ukuthi yilabo ababukeka kahle, abangakwazi ukukhuluma kahle, abayizifundiswa kanye nabanolwazi, bonke abangongqondongqondo? Ingabe ucabanga ukuthi yilabo abangakwazi ukudansa nokubhala kanye nokupenda nokuvusa ilukuluku? Ingabe lokhu akumnyundeli uNkulunkulu? Uyiqonda kabi kakhulu inhliziyo kaNkulunkulu! Abantu ngaso sonke isikhathi bathi uNkulunkulu ulungile, bathi ubona okungaphakathi enhliziyweni, kodwa ngokushesha nje lapho bebhakana nesilingo esithile bamqonda kabi uNkulunkulu. Ingabe manje usuqonda ngokwengeziwe? Yini uNkulunkulu ayibhekayo kumuntu? UNkulunkulu ubheka inhliziyo yomuntu. Konke ukuziphatha komuntu kulawulwa yinhliziyo yakhe. Uma inhliziyo iqotho, khona-ke uzoba nobuntu obuhle futhi ungaqonda kancane kancane iqiniso, futhi uma uqonda iqiniso elithile unganelisa izimfuneko zikaNkulunkulu futhi ucabangele injongo kaNkulunkulu. Uma inhliziyo yakho inobuqili kakhulu, ivalekile, ilukhuni, futhi inobugovu, khona-ke awunabo ubuntu obuhle, futhi uba njani umuntu ungenabo ubuntu obuhle? Ukholelwa futhi acabange ukuthi uNkulunkulu uyilokhu nalokhuya, kodwa lapho ebhekana nokungokoqob umqonda kabi uNkulunkulu futhi ehluleke ukuqonda injongo kaNkulunkulu. Ngakho, ingabe angathola iqiniso? (Ngeke athole iqiniso.) Ekugcineni lapho engatholi iqiniso, ingabe uzozisola yena noma abanye, noma uzokhononda ngoNkulunkulu athi uNkulunkulu akalungile? (Uzozisola yena.) Khona-ke, yini okufanele lo muntu ayenze? Kufanele enze izenzo ezithile kanye nemikhuba ethile. Lapho uveza ubugovu, uthi, “Nginobugovu,” bese ucabanga, “Ngingenza kanjani ukuze ngingabi nobugovu?” Futhi ukuze wenze lokho okokuqala ubeka eceleni izithakazelo zakho. Njengoba ubeke celeni okuncane ngesikhathi, ngokuphindaphindiwe, ngesikhathi ubeka eceleni ngokwengeziwe uzozizwa ukhululeke ngokwengeziwe ngaphakathi, futhi uyozwa ngokwengeziwe ukuthi ukuba wumuntu onjalo kuyinto ongaziqhenya ngayo, ukuthi ukuba njalo kulifanele igama elithi “umuntu,” ukuthi ukuphila ngale ndlela emhlabeni kusobala futhi kuqondile, ukuthi kuwukuba umuntu wangempela ophila ngokuvumelana nempilo uNkulunkulu amnikeze yona nangazo zonke izinto uNkulunkulu amnikeze zona. Lapho uphila ngale ndlela ngokwengeziwe nenhliziyo yakho iyokhululeka ngokwengeziwe futhi ibe nokukhanya. Lokhu kuwukungena endleleni efanele, akunjalo?
Ingabe ubugovu, ukuxegelwa yisimilo, ubuqili, nokuzikhukhumeza komuntu kungabekwa eceleni? Empeleni kungabekwa eceleni, kodwa abantu abazimisele ukuhamba kule ndlela. Bazazisa kakhulu izithakazelo zabo futhi banenkani kakhulu, abayiqondi injongo kaNkulunkulu futhi ngaso sonke isikhathi badidekile. Ingabe kuwukuthi uNkulunkulu ubagcina besebumnyameni? Akukhona ukuthi uNkulunkulu ubafihlela okuthile. UNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uvulekile kubantu, kodwa abantu abezi phambi kukaNkulunkulu futhi bavulekile Kuye kodwa baqhubeka nokufuna ukwamukela ngesihle umusa abanikeza wona. UNkulunkulu uthi, “Uma nifuna ukwamukela lo musa futhi nithole lawa maqiniso, kulungile. Kunombandela owodwa kuphela: Bekani eceleni izithakazelo zenu siqu futhi niguqulele inhliziyo yenu kiMi.” Yilona umbandela okungekho umuntu ongawufinyelela. Abantu baqhubeka nokufuna ngenkani umusa, ukuthula, nokujabula, futhi bathole iqiniso elivela kuNkulunkulu, kodwa abaguquleli izinhliziyo zabo kuNkulunkulu. Luhlobo luni lomuntu lolu? Ingabe ukuyena yini lona umuntu wohlobo lukaSathane? Ingabe ikhona ngempela indlela yokuthi othile abe yikho kokubili? Eqinisweni angeke. Eqinisweni uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uhola wonke umuntu, kungakhathaliseki ukuthi uyakuvuma noma uyakwamukela ukuthi wenza kanjalo; kumane nje kuwukuthi aniziguquleli izinhliziyo zenu kuNkulunkulu, futhi izinhliziyo zenu zilukhuni kakhulu, ngakho ngeke nithole lutho—akusikho ukuthi uNkulunkulu unombono ophambene ngani. Abantu bavame ukuthi uNkulunkulu uzoba nomusa kulowo azoba nomusa kuye, kodwa abaqondi ukuthi lokho kusho ukuthini ngempela lapho bekuzwa futhi eqinisweni bakuqonda kabi okushiwoyo. Abantu bacabanga ukuthi kusho ukuthini? UNkulunkulu wazisa noma ubani amthandayo futhi anike umusa noma ubani amthandayo. Umusa uvela kuNkulunkulu, futhi uwunika noma ubani afuna ukumnika wona. Ingabe lokhu kunjalo? Ngaphandle uma bekuqhathanisa nokungokoqobo ngempela lokhu, abantu bayozwa sengathi kufanele kube njalo, futhi, ngokuvumelana nokukholelwa nangombono womuntu, kufanele kube njalo. Nokho, eqinisweni uNkulunkulu ulungile kuwo wonke umuntu futhi ubanika ngokulinganayo; kumane nje kuwukuthi kunengxenye yabantu abanezinhliziyo ezilukhuni kakhulu, abangezi phambi kukaNkulunkulu, abafuna ukuzakhela eyabo siqu impilo enhle nekusasa ngezandla zabo zombili futhi abafuna ukulawula ikusasa labo siqu futhi abangafuni ukuvumela uNkulunkulu ukuba abalawule. Ngakho abahlakaniphile futhi abasho ukuthi: “Konke kusezandleni zikaNkulunkulu kungakhathaliseki ukuthi ngenzani. Ngingase futhi ngiphendukele kuNkulunkulu futhi kunesizathu ukwenza kanjalo futhi ngingazuza okuningi.” Abanakho lokhu kucabanga futhi ngaso sonke isikhathi benza ngobuwula. Isiwula esinjalo njalo sicabanga ukuthi sihlakaniphile, sicanga ukuthi, “Abanye abantu baye badela imindeni yabo, basala bengenalutho, futhi ekugcineni baphendulela izinhliziyo zabo kuNkulunkulu, kodwa kuyini abakuzuzile? Bheka ukuthi mina ngihlakanipha kangakanani: Angifaki zibuko zamehlo, kodwa ngisebenza ngomshini wokubala kangcono kunabanye. Angizivezi kunoma ngubani. Akakho owaziyo ukuthi ngibala kahle kangaka, futhi abazi ngisho nokuthi ngihlela ukwenzani! Ngizoqhubeka nale ndlela ngiphakathi nendawo, ngingadeli lutho futhi ngingahlehlisi lutho, futhi ekugcineni ngizothola nensindiso. Yeka ukuthi uyisiwula kanjani! Unamathela ngenkathi ezindleleni zakhe, futhi akazi ngisho lokho uNkulunkulu azokwenza esikhathini esizayo, udele yonke into futhi akashiyanga ngisho nalutho kokubuyela emuva.” Ngubani ngempela oyisiwula? Umuntu ocabanga ngale ndlela uyisiwula! Yilona umehluko ngokungafani kobuntu.
Uhlobo olunjani lomuntu uNkulunkulu alwamukelayo? Uhlobo olunjani lomuntu uNkulunkulu alufunayo? (Abantu abazimisele ukuzidela nokuzinikela kuNkulunkulu, abantu abasebenzela uNkulunkulu ngobuqotho.) Abantu abasebenzela uNkulunkulu ngobuqotho. Eqinisweni, uNkulunkulu akafuni okuningi kuwe. Akafuni ukukwephuca izithakazelo zakho siqu; kunalokho, uninika ithuba lokuzilolonga, ukwenza, kanye nokusebenzisa onke amakhono enu. Into uNkulunkulu ayifunayo yinhliziyo eqotho kumuntu. Kungakhathaliseki ukuthi kukuphi lapho wenza khona umsebenzi wakho nokuthi yimaphi amakhono onawo, ukuvumela ukuba uwabone onke futhi akunike ithuba elikhulu lokuba ubonise amakhono kanye namathalenta akho, futhi ekugcineni uNkulunkulu ufuna ukukuvumela ukuba uthole iqiniso kuzo zonke izimo naphakathi kwayo yonke imisebenzi, ukuvumela ukuba uqonde injongo kaNkulunkulu futhi uphile njengomuntu. Akafuni ukukwephuca noma ngabe yini kodwa kunalokho ufuna ukuba ufeze okuningi ongakwazi ukukwenza kuzo zonke izinto. Abantu njalo abanomqondo ovalekile futhi bacanga ukuthi, “Ngifunde ukusebenza ngamaphimbo ezweni, ngakho ingabe indlela yami yokusebenza ngamaphimbo manje ayikafinyezwa ngenxa yokwenza kwami umsebenzi wami?” Ingabe ngempela ifinyeziwe? Ngisho noma kunjalo, okungakanani ukulahlekelwa lokho? Kodwa, empeleni, akukhona ukuthi kube ukufinyezwa kuphela, kodwa kuye kwabonakaliswa futhi kwasetshenziswa ngisho nakakhulu; ingabe lokhu akulona ithuba elikhulu? Ninethuba lokuthuthukisa ukuzilibazisa kanye namakhono enu siqu; ngaphezu kwalokho, phakathi nalesi sikhathi wenza umsebenzi womuntu owadalwa, ungathola iqiniso, futhi ungene endleleni efanele yokuphila. Lena yinto enhle kakhulu nenesibusiso esikhulu kakhulu! Akukho ukulahlekelwa ngisho noma ungabala kanjani. Uma uzahlukanisa nezwe lobubi kanye nenkohlakalo, lapho uzahlukanisa namaqembu amabi, okungenani umcabango wakho, umoya, kanye nenhliziyo ngeke kusaqhubeka nokuhlukunyezwa kanye nokonakaliswa. Lapho ufika endaweni ehlanzekile futhi uza phambi kukaNkulunkulu, ingabe lokhu akusona isibusiso esikhulu? Njengoba abantu bezalwa kabusha ngokuphindaphindiwe kuzo zonke izizukulwane, mangaki amathuba akhona afana naleli? Akubona yini labo abazalwe kuphela ezinsukwini zokugcina abanaleli thuba? Lena yinto enkulu! Jabula ngasese; lesi akusona isimo sokuba nosizi noma sokulahlekelwa. Njengomuntu owadalwa phakathi kwazo zonke izinto embulungeni kanye nezigidigidi zabantu abakulo mhlaba, bangaki abantu abangathola ithuba elinjengaleli, ukunikeza ubufakazi ngezenzo zeNkosi yendalo njengomuntu owadalwa ngokuthi bazinikele ekufezeni umsebenzi kanye nomthwalo wabo wemfanelo? Ubani ongaba naleli thuba? Ingabe baningi abantu abanjalo? Bangakanani ngokwenani? (Uyedwa kwayizinkulungwane eziyishumi.) Ingabe kunoyedwa kwabayizinkulungwane eziyishumi? Cha, bancane ngisho kunalokho! Ikakhulu nisebenzisa amazwi enu okuhlabelela kanye nolwazi enilufundile ukuze nenze umsebenzi wenu—lokhu kubaluleke kakhulu! Ingabe lokhu akusona isibusiso esikhulu? Aninikezi ubufakazi bomuntu, futhi anenzi inkonzo engasho lutho. Lowo enimkhonzayo yiNkosi yendalo—yeka ukuthi lokhu kuhle kangakanani! Phakathi nale nkathi niye naniselwa futhi naba nesimweni esikahle kangaka kanye nasethubeni. Uma ningatholi izinzuzo ezithile ezingokoqobo futhi ningatholi iqiniso, khona-ke ingabe ngeke nizisole ukuphila kwenu konke? Nizozisola ingxenye elandelayo yokuphila kwenu, futhi ningaba nokuhlekwa, ngoba ukukhuluma lokhu kuyadumaza. Ngakho, kufanele nilibambe leli thuba futhi ningalivumeli ukuba linedlule. Kufanele nithole okuningi kangokunokwenzeka kukho. Nenze kahle phakathi nenkathi yokwenza kwenu umsebenzi. Ukuthola iqiniso kuyinto eyigugu kakhulu kanye nengxenye yokuphila ebaluleke kakhulu! Phakathi kwayo yonke indalo akekho noyedwa umuntu noma iqembu elilodwa labantu elibusiseke ukwedlula nina lapha. Yini lokho abanye abakuphilelayo? Baphilela ukuphindukuzalwa, injabulo yalo mhlaba. Yini lokho enikuphilelayo? Umsebenzi wenu, ukwenza umsebenzi wenu njengomuntu owadalwa. Ingabe akulona igugu ukuphila ngale ndlela? Kuyigugu ngokwedlulele! Ngakho, akufanele niwubheke kalula umsebenzi eniwenzayo.
Yilabo Kuphela Abazisa Izwi LikaNkulunkulu Abakhathalela Ngempela Ukungena Ekuphileni
Indlu kaNkulunkulu ikhiqiza amavidiyo okuhlabelela kanye nokuphindaphinda izwi likaNkulunkulu kubantu ukuze balalele futhi babheke ngokuphindaphindiwe. Njengoba abantu becabanga ngalawa mazwi kaNkulunkulu, khona-ke, ngokuhamba kweminyaka, amazwi azohluma ezinhliziyweni zabo, futhi bazothola okushiwo ngamanye awo ngaphandle kokuba bakuqaphele lokho. Ngokushesha lapho la mazwi ehluma enhliziyweni yomuntu, ingabe isimo sangaphakathi sokuphila komuntu asinoqala ukushintsha? Ingabe niye nawaqonda la mazwi eniwahlabelelayo kanye naphindwaphindwayo? Into yokuqala engashiwo ngokuqiniseka ukuthi ayiqiniso. Ngakho, enza msebenzi muni lawa maqiniso ngaphakathi komuntu? Ingabe niye nezwa ukuthi lawa mazwi ayisidingo somoya womuntu? Lawa mazwi ayisidingo kanye namandla esisusa somoya womuntu, futhi singathi angashintsha isimo sokuphila komuntu kanti awukudla okungokomoya empilweni yomuntu. Abaningi benu basengakabi nanoma yiluphi ulwazi. Nisaqonda kuphela imfundiso encane, kodwa ninamandla amakhulu. Uma nilalela njalo lawa mazwi, nihlanganyela njalo, nidla futhi niphuza lezi zinto futhi nizuza okuhlangenwe nakho okungokoqobo kanye nokufunda ngokwenza, khona-ke niyoba okuthile ngempela, futhi isimo sokuphila kwenu siyoba noshintsho olushukumisa umhlaba futhi ngeke kusaba yindaba yokuthi ninawo yini amandla, njengoba kunjalo manje. Abanye abantu basesimweni esibi, ngeke basixazulule ngokuhlanganyela nabanye, futhi bazizwa kabi kuze kube sephuzwini lapho bengalali kahle nasebusuku. Bayacabanga futhi bathandaze kodwa banokudabuka ezinhliziyweni zabo, futhi kunezinto ezithile abangakwazi ukuzinqoba. Khona-ke, bavula izwi likaNkulunkulu bese bekopisha imigqa embalwa, futhi izinhliziyo zabo ziyakhanyiswa, babe namandla, futhi bangasabi nokudabuka. Lapho bephinda belala phansi balala ngokuthula okukhulu, kuze kube sekuseni. Kungani kunjalo? Ingabe umuntu onjalo uyiqonda ngempela leyo migqa ayikopishile yezwi likaNkulunkulu? Ingabe uba nalo ulwazi ngemva kokuwakopisha? Akunjalo neze. Ukuwakopisha ngeke kuthathe indawo yokuba nolwazi, kodwa—ngisho nakuba engayiqondi ncamashi indlela asebenza ngayo—njengoba ewafunda ngobuqotho futhi ecabanga ngalawa mazwi, nakuba engenakho ukukhanya okungako futhi enokuqonda okuncane kuphela, uzizwa ekhuthazekile ngaphakathi futhi eduduzekile enhliziyweni yakhe. Isimo sakhe sangaphakathi siqala ukushintsha, akasabi ongenzi lutho noma obuthakathaka, futhi usenganqoba izilingo abhekana nazo.
Ngokukholelwa kuNkulunkulu kuze kube manje, abaningi benu banolwazi lokuqonda oluthile oluyisisekelo ngomphumela wezwi likaNkulunkulu kumuntu, noma ngendlela enibheka ngayo izwi likaNkulunkulu ngokombono wenu. Nizwa sengathi, kungakhathaliseki ukuthi omunye unamandla noma ubuthakathaka, ngeke asuke ezwini likaNkulunkulu, futhi kungakhathaliseki ukuthi yiluphi uhlobo lomphumela izwi likaNkulunkulu elinawo kumuntu, ngeke ehlukaniswe nezwi likaNkulunkulu ngisho okwesikhashana. Abaningi benu abanalo ulwazi futhi abanawo umuzwa ngezwi likaNkulunkulu, futhi lokhu kumane kufanele nokuba nomuzwa womoya noma amanzi. Abantu ngeke bahlakaniswe nomoya noma namanzi ngisho nosuku olulodwa, kodwa bakubheka njengezinto ezivamile. Uma ukwazi ukuphuza amanzi kanye nokuphefumula umoya ekuphileni kwakho kwansuku zonke, uzwa sengathi umoya kanye namanzi uhlale njalo unikezwa khona ekuphileni, ngakho awuke ucabange ukuthi, “Umoya ubaluleke kakhulu kimi.” Awukwazi ukucabanga ngesimo sengqondo noma umuzwa wokulahlekelwa amanzi noma umoya. Ngeke ubone noma ucabange ngendima ebalulekile ayidlalayo ekuphileni kwakho. Nokho, uma ngosuku oluthile ungazithola usendaweni engenamoya, khona-ke uzokuzwa ukuthi umoya ubaluleke kangakanani kuwe. Noma, uma uzithola usendaweni ewugwadule lapho ungeke wabona khona iconsi lamanzi eduze kwakho, lapho ungenamanzi futhi womile, uzokuzwa ukuthi amanzi abaluleke kangakanani kuwe. Lesi cishe yisimo esifanayo nesimo sengqondo enibheka ngaso izwi likaNkulunkulu. Ngeke nizwe ngokubaluleka kwezwi likaNkulunkulu noma nicabange ngokuthi umphumela walo mkhulu kangakanani kini, kodwa kufanele nilifunde kancane nsuku zonke. Uma niqhubeka isikhathi ningalifunda, khona-ke umoyo wenu uzoba nobuhlungu, futhi nizozwa sengathi aninakho okunisekelayo. Njengoba nilifunda, nizozuza amandla, amandla esisusa nokholo.
Manje, abaningi benu nisenalolo lwazi lokuqonda oluncane kakhulu lwezwi likaNkulunkulu. Luyini ulwazi lokuqonda? Kusho ukuthi ninokuqonda okuthile kombono ocatshangelwe, ngakho lapho nizwa ngezwi likaNkulunkulu ngomlomo, nizobabaza, “Kulungile!” Niyavuma ngomlomo ukuthi kulungile, futhi ngalokhu akekho noyedwa kini ozokhuluma kabi. Nokho, lapho kuziwa ezwini likaNkulunkulu mayelana nokwahlulela kukaNkulunkulu umuntu, ukusola kwaKhe umuntu, kanye nokudalula kwaKhe izimo zokukhohlakala komuntu, nivuma kuphela lokho, noma nibe nokuqonda lokho. Aninalo ulwazi ngokuguqulwa kwezimo, futhi nidinga ukungena ngokujulile futhi nibe nolwazi olujulile futhi nifunde ngokujulile kokuhlangenwe nakho, futhi ngale ndlela impilo yenu iyothuthuka. Imbewu esezinhliziyweni zenu iye yaqhuma kuphela; ayikaqhakazi noma yaveza izithelo. Ngakho, kunzima kakhulu ngani ukukhuluma ngokuqonda ulwazi lwezwi likaNkulunkulu noma ukuba nolwazi ngeqiniso. Ngakho, ingabe nikubala njengokuba nokuphila ngenkathi nisekulesi simo? Ingabe seniye nangena eqinisweni elingokoqobo? Khona-ke ingabe ninalo iqiniso? Nonke ninikina amakhanda enu. Kungani? Kungenxa yokuthi nakuba ngokuvamile ningasho okuningi ngemfundiso, anikwazi ukwenza ezimweni ezingokoqobo; kungenxa yokuthi aninaso isimiso noma indlela yokuya phambili futhi aniyazi indlela eqondile yokwenza. Umuntu ngokuvamile uqeda ukufundiswa okuvamile kwezohwebo ngemva kweminyaka emithathu. Labo abafundela ubuciko bokulwa bavame ukuqeda ukufundisa ngemva kweminyaka emithathu noma emihlanu. Nokho, ukungena ekuphileni kuhamba kancane kakhulu, futhi nokungena eqinisweni langempela kuhamba kancane kakhulu; akuyona indaba yokumane ukhuthazele iminyaka, njengomakoti ohluphekayo ngelinye ilanga ezoba umamezala. Akunjalo. Umuntu kufanele angene kuzo zonke izindlela: Enye indlela incike ezingeni lomuntu kanye nemigomo yomuntu siqu umuntu ayifunayo, kanye nayidingayo, phakathi kwezinye izimo, ukuthi umuntu angakhuthazela yini futhi abe nokuzimisela ukuhlupheka kanye nesifiso sokushiya nokuzikhandla ngoNkulunkulu. Enye indlela idinga ukudla kanye nokuphuza kakhulu izwi likaNkulunkulu, ukuhlangana ndawonye kakhulu, kanye nokuhlanganyela nabanye ngokwengeziwe, futhi idinga ubuholi babantu abakahle. Ngale ndlela, ukukhula kwakhe kuzoshesha. Ngokushesha lapho umuntu efunda le ndlela, khona-ke uba nendlela yokuqala ukungena khona. Kamuva, ngesikhathi nenza umsebenzi wenu, nizofunda indlela yokuzithoba, indlela yokwamukela lonke uhlobo lokuthenwa kanye nokulungiswa, kanye nendlela yokwamukela zonke izinhlobo zovivinyo. Nizofunda ukuthi ningasebenza kanjani ndawonye nabo bonke abafowethu nodadewethu—kungaba yilabo abasezikhundleni zomthwalo wemfanelo noma labo abavamile. Nizofuna ukuthi ningasithatha kanjani isinyathelo sokwanelisa izimfuneko zikaNkulunkulu ezahlukahlukene kanye nokuthi ningayenza kanjani imisebenzi yenu kahle. Kwanele ngani ukuba nifunde zonke lezi zinto. Lesi yisikhathi sempilo yenu esiyigugu kakhulu ukuba nisikhumbule. Yisikhathi eningasoze nasikhohlwa.
Ngesikhathi sokwenza umsebenzi wenu, nizovikeleka uma ningathola iqiniso futhi nithole izindlela zokwenza iqiniso kanye nokungena ekuphileni, futhi nibe nokuqiniseka; khona-ke noma yisiphi isilingo esincane noma isimo esincane enibhekana naso kamuva ngeke sibe yinkinga. Phakathi nalesi sikhathi, qinisanani. Nisizane. Lapho nibona ababuthakathaka banikezeni usizo olwengeziwe futhi nibasekele. Sebenzani kanzima ukuze nonke nibeke isisekelo, ukuze nithole izindlela zokwenza iqiniso kanye nokungena ekuphileni, futhi uma endleleni yokuhlangenwe nakho kwenu nithola ukwazi uNkulunkulu okuncane khona-ke lokho kuhle nakakhulu. Ngokushesha lapho isisekelo senu sesibekiwe, isimo sezimpilo zenu siyoguquka, futhi isimo senu esingokomoya siyoguquka, khona-ke indlela ephambi kwenu izolondeka. Inkathi enzima kakhulu yokukholelwa kuNkulunkulu yisigaba sokwedlula enkathini yentshiseko kuye ekungeneni kokungokoqobo. Isigaba sentshiseko siba lapho ukhuluma okuthile ngemfundiso, uphindaphinda iziqubulo, uma nesiqu esingokomoya esingavuthiwe, futhi ungaqondi lutho kodwa ukholelwa kalula ekutheni ukukholelwa kuNkulunkulu kuyinto enhle. Inkathi yokwedlula kulesi sigaba uye esikhathini sokungena eqinisweni elingokoqobo, ukukhula, kanye nokuvuthwa, kuyinkathi yokuphumputha kanye nokwedlula. Lapho beqala ukukholelwa kuNkulunkulu, abantu ngokuvamile benza ngaso sonke isikhathi ngentshiseko yabo: Bayathanda ukwenza, kanye nokugqama. Nizolondeka uma ningedlula kulesi sigaba sentshiseko niye esigabeni lapho nizokwazi khona ukuthi liyini iqiniso langempela, ayini amazwi emfundiso, kuyini ukusho iziqubulo, kuyini ukungena kokungokoqobo, kanye nokuthi kuyini ukuqonda iqiniso. Ngaleso sikhathi, izilingo noma uvivinyo oluncane ngokuphawulekayo ngeke lusaba yinto enkulu kini; ngeke kusaba yisithiyo esinzima, futhi niyobe nenze umsebenzi wenu ngendlela eyigugu futhi nathola izinto eziningi.
Okwedlule：Isahluko 60. Lokho Ukuguquka Kwesimo Okuyikho Nendlela Eya Ekuguqukeni Kwesimo
Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III Isahluko 44 Umele Ukuphilela Iqiniso Njengalokhu Ukholelwa KuNkulunkulu Isithasiselo:Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe